သုတစာပေ Archives - Manaw Maya
အလုပ်ပြီးချိန် ညခင်းတွေမှာ မင်းဘာလုပ်လဲ ဆိုတာက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ် တစ်နေ့ကို တစ်နာရီလောက် ဒါတွေလုပ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။
မင်းဘဝပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ် မင်းရဲ့ အလုပ်ချိန် ညနေ6နာရီမှာ ပြီးပြီးတော့ မင်းက ည သန်းခေါင် 12 နာရီမှ အိပ်ရာဝင်တယ်ဆိုပါစို့။
ဒီကြားထဲက6နာရီကို မင်းဘယ်လို အသုံးချပါသလဲ? TV ကြည့်တာလား? တကယ်တော့ ဒီအချိန်ကို မင်းဘယ်လိုအသုံးချတယ်ဆိုတာက မင်းထင်တာထက် ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
လူတော်တော်များများ ထင်နေတာက ကျွန်တော်တို့ career ကို တိုးတတ်ဖို့ အလုပ်ချိန်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့ပဲ ထင်နေကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်နဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ခေါင်းဆောင်အပေါ်ပဲ မူတည်နေတယ်လို့ ထင်နေကြတယ်။
တကယ်လို့ မင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘဝမှာ တိုးတတ်မှုမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အလုပ်နဲ့ မင်းရဲ့ အလုပ်ရှင်တွေကို မင်းအပေါ် မြေတောင်မြှောက်မပေးလို့ဆိုပြီး အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတတ်အောင် ပျိုးထောင်ဖို့ဆိုတာ မင်းရဲ့ တာဝန်ပါ မင်းဟာ မင်းရဲ့ ညခင်းအချိန်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုတာဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ဘဝမှာ မင်းလိုချင်တာရဖို့ knowledge က အရေးကြီးပါတယ် ဗဟုသုတတွေ စုဆောင်းရပါမယ်။ ဒီလို ဗဟုသုတတွေကို မင်းရဲ့ အလုပ်မှာ မင်းရဲ့ ဘဝမှာ ပြန်လည်အသုံးချရပါမယ်။
တကယ်လို့ မင်းက စာဖတ်သန်တယ်ဆိုရင် မင်းဗဟုသုတတွေ ပြည့်ပြီး မင်းရဲ့ စကားပြောတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ အကြောင်းအရာတွေ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
Anthony Robbins က ပြောပါတယ် တကယ်လို့ မင်းဟာ တစ်နေ့ကို တစ်နာရီအချိန်ပေးပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုကို လေ့လာမယ်ဆိုရင် တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ မင်းရမဲ့ knowledge တွေက ကမ္ဘာ့လူတွေရဲ့ 99.999 % လောက်ထိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့။
တစ်နေ့ကို အချိန် သုံးဆယ်မိနစ်လောက်ပဲ စာဖတ်ချိန်ပေးနိုင်ရင်တောင် တစ်နေ့တစ်နေ့ knowledge တွေ အများကြီးရမှာပါ။
မင်း expert မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တောင် မင်းရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေထက် ပိုပြီး ဗဟုသုတများလာမယ်ဆိုတာ အာမခံနိုင်ပါတယ် ။
တကယ်လို့ မင်းရဲ့ လက်ရှိအလုပ်က မင်းတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မင်းဟာ ဒီအချိန်တွေမှာ မင်းတကယ် စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ လေ့လာလို့ရပါတယ်။
ဒီလို ရတဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ လေ့လာပြီး အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာ မင်းရဲ့ career ကို ပြောင်းလိုက်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ start up တစ်ခု စလိုက်လို့ ရပါတယ်။
၂။ Project တွေ လုပ်ဆောင်ပါ မင်းရဲ့ ဗဟုသုတတွေ စိတ်ကူးတွေကို ပုံဖော်ဖို့ မင်းအလုပ်က အခွင့်အရေးမပေးရင် မင်းကိုယ်တိုင် ရှာဖွေလုပ်ဆောင်ပါ။
volunteer project တွေ လုပ်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်နဲ့ ဝါသနာတူတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ စမ်းသပ်ကြည့်ပါ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတွေ လေ့လာပါ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်ကြည့်ပါ။
၃။ Network တည်ဆောက်ပါ
မင်းရဲ့ အလုပ်လမ်းကြောင်းမှာ ဖြောင့်ဖြူးဖို့ strong connection network တစ်ခု ရှိနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ မင်းရဲ့ အချိန်ထဲက ဖဲ့ပြီး လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
အတော်ဆုံး မိတ်ဆွေတွေကို ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့ရဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ ရယူတာတွေ သတင်းတွေ အချက်အလက်တွေ ဗဟုသုတတွေ ရအောင်လုပ်ပါ professional life ထဲက ဆရာကြီးတွေဆီက လေ့လာသင်ယူပါ။
အလုပ်က အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ဒီလို ညချမ်းတွေမှာ အနားယူတယ်ဆိုပြီး movie ကြည့်တာ tv ကြည့်တာ game ကစားတာ ။
social media ပေါ်မှာ သူများတေ အကြောင်း လိုက်စပ်စုနေတာ အတင်းပြောနေတာ ဒါတွေနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးရတာ အရမ်းပျော်စရာကောင်းမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ဒါတွေက မင်းရဲ့ အနာဂတ်ကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး မင်းဘဝရဲ့ အပြောင်းအလဲက ဒီနေ့ညက စပါပြီ။6နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိပါ။
အလုပ်ပြီးလို့ မင်းအိမ်ပြန်တယ် မင်းဟာ တစ်ခြားသူတွေ ခိုင်းတဲ့အရာတွေကို လုပ်စရာမလိုတဲ့အချိန်ပါ မင်းရဲ့ အားလပ်ချိန်ပါ ဒါကို မင်းဘယ်လို အသုံးချမလဲ ။
အလုပျပွီးခြိနျ ညခငျးတှမှော မငျးဘာလုပျလဲ ဆိုတာက မငျးရဲ့ အနာဂတျကို ဆုံးဖွတျပေးလိမျ့မယျ တဈနကေို့ တဈနာရီလောကျ ဒါတှလေုပျဖို့ အခြိနျပေးလိုကျပါ။
မငျးဘဝပွောငျးလဲပါလိမျ့မယျ မငျးရဲ့ အလုပျခြိနျ ညနေ6နာရီမှာ ပွီးပွီးတော့ မငျးက ည သနျးခေါငျ 12 နာရီမှ အိပျရာဝငျတယျဆိုပါစို့။
ဒီကွားထဲက6နာရီကို မငျးဘယျလို အသုံးခပြါသလဲ? TV ကွညျ့တာလား? တကယျတော့ ဒီအခြိနျကို မငျးဘယျလိုအသုံးခတြယျဆိုတာက မငျးထငျတာထကျ ပိုအရေးကွီးပါတယျ။
လူတျောတျောမြားမြား ထငျနတောက ကြှနျတျောတို့ career ကို တိုးတတျဖို့ အလုပျခြိနျအတှငျးမှာ ကြှနျတျောတို့ ကွိုးစားအားထုတျရမယျလို့ပဲ ထငျနကွေတယျ။
ကြှနျတျောတို့ အနာဂတျနဲ့ အလုပျအကိုငျတှဟော ကြှနျတျောတို့ အလုပျလုပျနတေဲ့ ကုမ်ပဏီနဲ့ ခေါငျးဆောငျအပျေါပဲ မူတညျနတေယျလို့ ထငျနကွေတယျ။
တကယျလို့ မငျး ကိုယျ့ကိုယျကို ဘဝမှာ တိုးတတျမှုမတှဘေူ့းဆိုရငျတော့ မငျးရဲ့ အလုပျနဲ့ မငျးရဲ့ အလုပျရှငျတှကေို မငျးအပျေါ မွတေောငျမွှောကျမပေးလို့ဆိုပွီး အပွဈတငျလို့မရပါဘူး။
ကိုယျ့ကိုယျကို တိုးတတျအောငျ ပြိုးထောငျဖို့ဆိုတာ မငျးရဲ့ တာဝနျပါ မငျးဟာ မငျးရဲ့ ညခငျးအခြိနျတှကေို ဘယျလိုအသုံးခလြဲဆိုတာဟာ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
ဘဝမှာ မငျးလိုခငျြတာရဖို့ knowledge က အရေးကွီးပါတယျ ဗဟုသုတတှေ စုဆောငျးရပါမယျ။ ဒီလို ဗဟုသုတတှကေို မငျးရဲ့ အလုပျမှာ မငျးရဲ့ ဘဝမှာ ပွနျလညျအသုံးခရြပါမယျ။
တကယျလို့ မငျးက စာဖတျသနျတယျဆိုရငျ မငျးဗဟုသုတတှေ ပွညျ့ပွီး မငျးရဲ့ စကားပွောတဲ့ ခေါငျးစဉျတှေ အကွောငျးအရာတှေ ပိုပွီးစိတျဝငျစားစရာကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။
Anthony Robbins က ပွောပါတယျ တကယျလို့ မငျးဟာ တဈနကေို့ တဈနာရီအခြိနျပေးပွီး အကွောငျးအရာတဈခုကို လလေ့ာမယျဆိုရငျ တဈနှဈကွာတဲ့အခါမှာ မငျးရမဲ့ knowledge တှကေ ကမ်ဘာ့လူတှရေဲ့ 99.999 % လောကျထိဖွဈပါလိမျ့မယျတဲ့။
တဈနကေို့ အခြိနျ သုံးဆယျမိနဈလောကျပဲ စာဖတျခြိနျပေးနိုငျရငျတောငျ တဈနတေ့ဈနေ့ knowledge တှေ အမြားကွီးရမှာပါ။
မငျး expert မဖွဈဘူးဆိုရငျတောငျ မငျးရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှထေကျ ပိုပွီး ဗဟုသုတမြားလာမယျဆိုတာ အာမခံနိုငျပါတယျ ။
တကယျလို့ မငျးရဲ့ လကျရှိအလုပျက မငျးတကယျစိတျဝငျစားတဲ့အလုပျမဟုတျဘူးဆိုရငျ မငျးဟာ ဒီအခြိနျတှမှော မငျးတကယျ စိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ လလေ့ာလို့ရပါတယျ။
ဒီလို ရတဲ့အခြိနျမှာ စိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ လလေ့ာပွီး အခြိနျတဈခုရောကျတဲ့အခါမှာ မငျးရဲ့ career ကို ပွောငျးလိုကျလို့ရပါလိမျ့မယျ။ start up တဈခု စလိုကျလို့ ရပါတယျ။
၂။ Project တှေ လုပျဆောငျပါ မငျးရဲ့ ဗဟုသုတတှေ စိတျကူးတှကေို ပုံဖျောဖို့ မငျးအလုပျက အခှငျ့အရေးမပေးရငျ မငျးကိုယျတိုငျ ရှာဖှလေုပျဆောငျပါ။
volunteer project တှေ လုပျနိုငျပါတယျ ကိုယျနဲ့ ဝါသနာတူတှနေဲ့ ပေါငျးပွီး အဖှဲ့လိုကျ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျကွညျ့ပါ စမျးသပျကွညျ့ပါ ကိုယျစိတျဝငျစားတဲ့အရာတှေ လလေ့ာပါ လကျတှေ့ လုပျဆောငျကွညျ့ပါ။
၃။ Network တညျဆောကျပါ
မငျးရဲ့ အလုပျလမျးကွောငျးမှာ ဖွောငျ့ဖွူးဖို့ strong connection network တဈခု ရှိနဖေို့ လိုပါတယျ။ ဒီလိုမြိုးမရှိဘူးဆိုရငျတော့ မငျးရဲ့ အခြိနျထဲက ဖဲ့ပွီး လုပျဆောငျရပါလိမျ့မယျ။
အတျောဆုံး မိတျဆှတှေကေို ဆကျသှယျပွီး သူတို့ရဲ့ အကွံဉာဏျတှေ ရယူတာတှေ သတငျးတှေ အခကျြအလကျတှေ ဗဟုသုတတှေ ရအောငျလုပျပါ professional life ထဲက ဆရာကွီးတှဆေီက လလေ့ာသငျယူပါ။
အလုပျက အိမျပွနျရောကျလို့ ဒီလို ညခမျြးတှမှော အနားယူတယျဆိုပွီး movie ကွညျ့တာ tv ကွညျ့တာ game ကစားတာ ။
social media ပျေါမှာ သူမြားတေ အကွောငျး လိုကျစပျစုနတော အတငျးပွောနတော ဒါတှနေဲ့ အခြိနျကုနျဆုံးရတာ အရမျးပြျောစရာကောငျးမှာပါ။
ဒါပမေဲ့ ဒါတှကေ မငျးရဲ့ အနာဂတျကို ကောငျးမှနျအောငျ လုပျပေးနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး မငျးဘဝရဲ့ အပွောငျးအလဲက ဒီနညေ့က စပါပွီ6နာရီကနေ ည ၁၂ နာရီထိပါ။
အလုပျပွီးလို့ မငျးအိမျပွနျတယျ မငျးဟာ တဈခွားသူတှေ ခိုငျးတဲ့အရာတှကေို လုပျစရာမလိုတဲ့အခြိနျပါ မငျးရဲ့ အားလပျခြိနျပါ ဒါကို မငျးဘယျလို အသုံးခမြလဲ ။
Author adminPosted on October 14, 2019 Categories Knowledge, သုတစာပေ
မွေးရာပါဉာဏ်ရည်မြင့်ပြီး ထက်မြက်တဲ့သူတွေမှာသာ ရှိတဲ့ အမူအကျင့် (၈)မျိုး
လူတွေထဲက လူတချို့က ကံကောင်းလွန်းစွာနဲ့ မွေးလာကတည်းက မြင့်မားတဲ့ ဉာဏ်ရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ် ထက်မြက်တယ်ဆိုတာကတော့ မွေးရာပါလည်းဖြစ်နိုင်သလို လေ့ကျင့်ယူလို့လည်း ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူ၊ ထက်မြက်တဲ့သူတွေဟာ အခုဖော်ပြမယ့် အလေ့အထတွေကို လုပ်လေ့ရှိပါတယ် ။
(၁) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်
ဉာဏ်ထက်တဲ့သူတွေဟာ တခြားလူတွေအကြောင်း၊ တခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေထက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ပိုစိတ်ဝင်စားလေ့ရှိကြတယ်။
ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေဟာ ဘယ်အခြေအနေမှာမဆို ကောင်းတဲ့ အချက်လေးတွေကိုမြင်အောင် ကြည့်တတ်ပြီး ဟာသနိုင်တယ်၊ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်၊
တစ်ယောက်တည်း ရှိတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စကားပြန်ပြောနေတာမျိုး၊ တစ်ကိုယ်တည်းကြားအောင် ရေရွတ်နေတဲ့အပြုအမူမျိုးတွေကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့သူတွေကပဲ လုပ်ကြတာပါ။
(၄) သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကို ပဲစွဲပြီးနားထောင်တာမျိုးလုပ်တတ်တယ်
တစ်နေကုန် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ နားထောင်နေတာမျိုး၊ သီချင်းစာသား ဒါမှမဟုတ် သံစဉ်တွေကို ခံစားပြီး နားထောင်နေတာမျိုး လုပ်တတ်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေတာမျိုးကို မလုပ်တတ်ပါဘူး အလုပ်အရမ်းကြိုးစားတဲ့ထဲ မပါပေမယ့် ရလဒ်ကောင်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတွေပါ။
(၆) သူတို့မှားရင် မှားနေမှန်းသိတယ်
ကိုယ်လုပ်တာ၊တွေးတာ၊ ပြောတာမှန်သမျှအရာအားလုံးကို မှန်တယ်လို့ထင်နေတာမျိုးမရှိဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ အယူအဆတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေ၊ အပြုအမူတွေ မှားသွားရင် ကိုယ်မှားနေမှန်း သိတယ် ပြီးတော့ မှန်အောင် ပြုပြင်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး။
ဉာဏ်ရည်မြင့်တဲ့သူတွေက စကားတွေ အများကြီးပြောနေတာမျိုး မလုပ်တတ်ဘဲ များများနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် များများနားထောင်၊ နည်းနည်းပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ရှိသူတွေပေါ့။
စူးစမ်းလေ့လာချင်စိတ်များတယ်၊ သိချင်စိတ်ရှိတယ်၊ အရာရာအတွက်မေးခွန်းတွေရှိနေတတ်တယ် အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကတွေးပြီး အဖြေရှာနေတတ် တယ်။
မှေးရာပါဉာဏျရညျမွငျ့ပွီး ထကျမွကျတဲ့သူတှမှောသာ ရှိတဲ့ အမူအကငျြ့ (၈)မြိုး
လူတှထေဲက လူတခြို့က ကံကောငျးလှနျးစှာနဲ့ မှေးလာကတညျးက မွငျ့မားတဲ့ ဉာဏျရညျကို ပိုငျဆိုငျထားကွပါတယျ ထကျမွကျတယျဆိုတာကတော့ မှေးရာပါလညျးဖွဈနိုငျသလို လကေ့ငျြ့ယူလို့လညျး ရပါတယျ။
တကယျတော့ ဉာဏျရညျမွငျ့တဲ့သူ၊ ထကျမွကျတဲ့သူတှဟော အခုဖျောပွမယျ့ အလအေ့ထတှကေို လုပျလရှေိ့ပါတယျ ။
(၁) ကိုယျ့ကိုယျကိုပဲ စိတျဝငျစားတယျ
ဉာဏျထကျတဲ့သူတှဟော တခွားလူတှအေကွောငျး၊ တခွားလူတှနေဲ့ပတျသကျတာတှထေကျ ကိုယျ့ကိုယျကိုပဲ ပိုစိတျဝငျစားလရှေိ့ကွတယျ။
ဉာဏျကောငျးတဲ့သူတှဟော ဘယျအခွအေနမှောမဆို ကောငျးတဲ့ အခကျြလေးတှကေိုမွငျအောငျ ကွညျ့တတျပွီး ဟာသနိုငျတယျ၊ ပြျောပြျောနတေတျတယျ၊
တဈယောကျတညျး ရှိတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို စကားပွနျပွောနတောမြိုး၊ တဈကိုယျတညျးကွားအောငျ ရရှေတျနတေဲ့အပွုအမူမြိုးတှကေို ဉာဏျရညျထကျမွကျတဲ့သူတှကေပဲ လုပျကွတာပါ။
(၄) သီခငျြးတဈပုဒျတညျးကို ပဲစှဲပွီးနားထောငျတာမြိုးလုပျတတျတယျ
တဈနကေုနျ ကိုယျကွိုကျတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျတညျးကိုပဲ ထပျခါတလဲလဲ နားထောငျနတောမြိုး၊ သီခငျြးစာသား ဒါမှမဟုတျ သံစဉျတှကေို ခံစားပွီး နားထောငျနတောမြိုး လုပျတတျပါတယျ။
အလုပျတဈခုကို ခကျခကျခဲခဲကွိုးစားနတောမြိုးကို မလုပျတတျပါဘူး အလုပျအရမျးကွိုးစားတဲ့ထဲ မပါပမေယျ့ ရလဒျကောငျးရအောငျဘယျလိုလုပျရမလဲ ကောငျးကောငျးသိတဲ့သူတှပေါ။
(၆) သူတို့မှားရငျ မှားနမှေနျးသိတယျ
ကိုယျလုပျတာ၊တှေးတာ၊ ပွောတာမှနျသမြှအရာအားလုံးကို မှနျတယျလို့ထငျနတောမြိုးမရှိဘူး။
ကိုယျ့ရဲ့ အယူအဆတှေ၊ အတှေးအမွငျတှေ၊ အပွုအမူတှေ မှားသှားရငျ ကိုယျမှားနမှေနျး သိတယျ ပွီးတော့ မှနျအောငျ ပွုပွငျဖို့ ဝနျမလေးဘူး။
ဉာဏျရညျမွငျ့တဲ့သူတှကေ စကားတှေ အမြားကွီးပွောနတောမြိုး မလုပျတတျဘဲ မြားမြားနားထောငျတတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ မြားမြားနားထောငျ၊ နညျးနညျးပွောတတျတဲ့ အကငျြ့ရှိသူတှပေေါ့။
စူးစမျးလလေ့ာခငျြစိတျမြားတယျ၊ သိခငျြစိတျရှိတယျ၊ အရာရာအတှကျမေးခှနျးတှရှေိနတေတျတယျ အကွောငျးအရာတဈခုကို ရှုထောငျ့ပေါငျးစုံကတှေးပွီး အဖွရှောနတေတျ တယျ။
Author adminPosted on October 9, 2019 Categories Knowledge, သုတစာပေ
ငွေကြေးကံကောင်းစေပြီး ပိုက်ဆံများများဝင်စေမည့် နည်းလမ်း(၅)ခု
ဝင်ငွေများများရှိအောင် အလုပ်များများလုပ်ဖို့လိုပါတယ် အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့တော့ ပိုက်ဆံကဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ပိုက်ဆံများများပိုလိုချင်ရင် အလုပ်ပိုကြိုးစားဖို့၊ ပိုပြီးတော့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အလုပ်ကြိုးစားပေမယ့် ဝင်ငွေနည်း နေတယ်၊ ပိုက်ဆံလည်းမစုမိဘူးဆိုရင် ငွေကြေးကံကောင်းအောင် ဒီအချက်လေးတွေကိုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့အရာ၊ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့အရာမှာ စေတနာအပြည့်အဝထားခြင်းအားဖြင့် အဲ့ဒါက သင့်ကိုငွေကြေးကံကောင်းစေပါတယ် ဒါက ဟာသလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး၊ တကယ်ပါ၊ မယုံရင်စမ်းကြည့်ပါ။
ပိုက်ဆံနဲ့ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေတာက သင့်ရဲ့စိတ်ကိုလေးလံထိုင်းမှိုင်းစေပြီး အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေကို တုံးစေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ့်အနားမှာ negative energy တွေဖုံးလွှမ်းနေစေပြီး အဲ့ဒါကပိုက်ဆံရမယ့် အခွင့်အလမ်းတွေကို တားထားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ငွေကြောင့် စိုးရိမ်နေတာကိုရပ်ပြီး တဆင့်ချင်းဖြေရှင်းပါ ဒါဆို ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ တဖြည်းဖြည်းပြေလည်လာပါလိမ့်မယ်။
လူအထင်ကြီးအောင် ဈေးကြီးပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးတာ၊ ရသမျှပိုက်ဆံတွေအားလုံးကို ပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးတာက အကုန်အကျလည်းများ အကျိုးအမြတ်လည်းနည်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် တတ်နိုင်သလောက် ပစ္စည်းတွေဝယ်သုံးတာကိုလျှော့ပြီး အရည်အချင်းတိုးတက်စေမယ့် သင်တန်းတက်တာမျိုး၊ ဘာသာစကားလေ့လာတာမျိုးတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
ပိုက်ဆံများများဝင်ချင်ရင် ပိုက်ဆံကိုလေးစားဖို့လိုပါတယ်။ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ ပဲဆိုပြီး မသိမ်းဘဲထားတာမျိုး၊ ပစ်လိုက်တာမျိုး၊ မလိုအပ်တာတွေမှာ တဖျောဖျောသုံးတာမျိုးမလုပ်မိပါစေနဲ့။
အတိုင်းအတာနဲ့တလေးတစားသုံးစွဲပါ ကိုယ်ကပိုက်ဆံကိုလေးစားရင် ပိုက်ဆံကလည်း ကိုယ့်ဆီရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ညစ်နွမ်းနေရင် ကိုယ့်အနားမှာ negative energy တွေခြုံလွှမ်းနေပြီး ငွေကြေးကံမှမဟုတ်၊ ဘယ်ကံမှကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက်စိတ်ကြည်လင်အောင်နေပါ။
စိတ်ကြည်လင်နေတဲ့အခါ positive energy တွေလွှမ်းခြုံနေမယ်၊ အတွေးကောင်းလေးတွေတွေးမယ်၊ အဲဒါကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်မယ်၊
ကောင်းတဲ့ကံတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအကြောင်းရင်းကြောင့်မှ စိတ်မညစ်ပါစေနဲ့၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြည်ဓာတ်လေးရအောင် ကြိုးစားပြီးနေပါ
ငှကွေေးကံကောငျးစပွေီး ပိုကျဆံမြားမြားဝငျစမေညျ့ နညျးလမျး(၅)ခု
ဝငျငှမြေားမြားရှိအောငျ အလုပျမြားမြားလုပျဖို့လိုပါတယျ အလုပျမလုပျဘဲနဲ့တော့ ပိုကျဆံကဝငျမှာမဟုတျပါဘူး ပိုကျဆံမြားမြားပိုလိုခငျြရငျ အလုပျပိုကွိုးစားဖို့၊ ပိုပွီးတော့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံဖို့လိုပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အလုပျကွိုးစားပမေယျ့ ဝငျငှနေညျး နတေယျ၊ ပိုကျဆံလညျးမစုမိဘူးဆိုရငျ ငှကွေေးကံကောငျးအောငျ ဒီအခကျြလေးတှကေိုလုပျကွညျ့လိုကျပါ။
ကိုယျလုပျလိုကျတဲ့အရာ၊ ကိုယျပေးလိုကျတဲ့အရာမှာ စတေနာအပွညျ့အဝထားခွငျးအားဖွငျ့ အဲ့ဒါက သငျ့ကိုငှကွေေးကံကောငျးစပေါတယျ ဒါက ဟာသလုံးဝမဟုတျပါဘူး၊ တကယျပါ၊ မယုံရငျစမျးကွညျ့ပါ။
ပိုကျဆံနဲ့ပတျသကျလို့ စိုးရိမျကွောငျ့ကွနတောက သငျ့ရဲ့စိတျကိုလေးလံထိုငျးမှိုငျးစပွေီး အလုပျနဲ့ပတျသကျတဲ့ စိတျကူးအကွံဉာဏျတှကေို တုံးစပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ကိုယျ့အနားမှာ negative energy တှဖေုံးလှမျးနစေပွေီး အဲ့ဒါကပိုကျဆံရမယျ့ အခှငျ့အလမျးတှကေို တားထားသလိုဖွဈနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ငှကွေောငျ့ စိုးရိမျနတောကိုရပျပွီး တဆငျ့ခငျြးဖွရှေငျးပါ ဒါဆို ငှကွေေးအခကျအခဲတှေ တဖွညျးဖွညျးပွလေညျလာပါလိမျ့မယျ။
လူအထငျကွီးအောငျ ဈေးကွီးပစ်စညျးတှဝေယျသုံးတာ၊ ရသမြှပိုကျဆံတှအေားလုံးကို ပစ်စညျးတှဝေယျသုံးတာက အကုနျအကလြညျးမြား အကြိုးအမွတျလညျးနညျးပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ တတျနိုငျသလောကျ တတျနိုငျသလောကျ ပစ်စညျးတှဝေယျသုံးတာကိုလြှော့ပွီး အရညျအခငျြးတိုးတကျစမေယျ့ သငျတနျးတကျတာမြိုး၊ ဘာသာစကားလလေ့ာတာမြိုးတှမှော ရငျးနှီးမွှုပျနှံပါ။
ပိုကျဆံမြားမြားဝငျခငျြရငျ ပိုကျဆံကိုလေးစားဖို့လိုပါတယျ။ ၁၀၀ ၊ ၂၀၀ ပဲဆိုပွီး မသိမျးဘဲထားတာမြိုး၊ ပဈလိုကျတာမြိုး၊ မလိုအပျတာတှမှော တဖြောဖြောသုံးတာမြိုးမလုပျမိပါစနေဲ့။
အတိုငျးအတာနဲ့တလေးတစားသုံးစှဲပါ ကိုယျကပိုကျဆံကိုလေးစားရငျ ပိုကျဆံကလညျး ကိုယျ့ဆီရောကျလာပါလိမျ့မယျ။
စိတျညဈနှမျးနရေငျ ကိုယျ့အနားမှာ negative energy တှခွေုံလှမျးနပွေီး ငှကွေေးကံမှမဟုတျ၊ ဘယျကံမှကောငျးမှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ တတျနိုငျသလောကျစိတျကွညျလငျအောငျနပေါ။
စိတျကွညျလငျနတေဲ့အခါ positive energy တှလှေမျးခွုံနမေယျ၊ အတှေးကောငျးလေးတှတှေေးမယျ၊ အဲဒါကွောငျ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှမှေနျမယျ၊
ကောငျးတဲ့ကံတှဖွေဈလာပါလိမျ့မယျ ဒါကွောငျ့ ဘယျလိုအကွောငျးရငျးကွောငျ့မှ စိတျမညဈပါစနေဲ့၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုအကွညျဓာတျလေးရအောငျ ကွိုးစားပွီးနပေါ
အိမ်မက် အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
အိပ်မက်ကို လူတိုင်းမက်ဖူးကြသည် သို့သော် မိမိတို့ အိပ်မက်၏ကောင်းကျိုး ဆိုး ကျိုးကို ကြိုတင်၍ သတိမထားသည့်အတွက် အကျိုးခံစားသင့်သော အရာ များလွဲချော်သွားသည်လည်း ရှိပေသည်။
မကောင်းကျိုးကို မခံစားရမီ ကြိုတင်၍ နိမိတ်အနေအထားအားဖြင့် အိပ်မက်မြင်မက်သည်ဖြစ်လျက် မိမိတို့၏ အိပ်မက်ကို သတိမမူ၍ ဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်ကို နားမလည်၍ဖြစ်စေ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေသည့်အတွက် ဒုက္ခမတွေ့သင့်ပဲနှင့် တွေ့ရတတ်သည်။
ဓာတ်လေချောက်ချား၍ မြင်မက်ခြင်းသည်လည်း ရှိတတ်၏ ထိုအိပ်မက်ကို အမှန်မယူနိုင်ပါ။အကယ်၍ ပုဗ္ဗနိမိတ်အဖြစ်ဖြင့် မြင်မက်သည်ဟု ယူဆမိလျှင် မိမိမြင်မက်သော အိပ်မက်၏ ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ကို ဝေဖန်တတ်သူကို ရှာ၍ ထိုသူအား ပြောပြရမည်။
သို့မဟုတ် အိပ်မက်ဆိုင်ရာ ကျမ်းစာအုပ် တို့ကို ဖတ်၍ ဝေဖန်ကောက်ချက်ချပြီးလျှင် ကောင်းကျိုးပေးမည့်အိပ်မက်ဖြစ်က ပေး ရန် အချိန်ကာလကို စောင့်ဆိုင်းလျက်အထူး သတိနှင့် နေရမည်။
ဆိုးကျိုးပေးမည့် အိပ်မက်ဖြစ်က ထိုပေးလတ္တံ့သော အကျိုးကို မပေးရန် အဟောသိ ကံ ဖြစ်သွားအောင် ရတနာသုံးပါး၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘွားမိဘတို့ကိုကိုးကွယ် ဆည်းကပ်၍ ယတြာများဆင်ရပေမည်။
ဤသို့ ညွှန်ပြအပ်သည့်အတိုင်း အိပ်မက်မြင်မက်တိုင်း ဂရုပြုရန် သတိရှိကြစေလိုသည် ဤသို့ ကျမ်း အစောင်စောင်တို့ အဆိုမတူညီကြသော်လည်း အိပ်မက်မကောင်း ထင်မြင်လျက်
မက်သည့်အချိန်အခါ နေ့၌ မက်သော အိပ်မက်ဖြစ်စေ ‘ယတြာကောင်းက မင်းလောင်းပျော်က’ ဆိုသကဲ့သို့ ဆေးရှစ်ပါးဖြင့် ခေါင်းေ ဆးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားပုထိုးရှိခိုးခြင်း၊ နံ့သာပန်းတို့ဖြင့် သက်စေ့ပူဇော်ခြင်း၊
တြိရန်း, စတုန်ရန်း, နံ့သင့်သစ်သား တို့ကို အောက် ခံပြု၍ ခေါင်းဆေးခြင်းကိုလည်းကောင်း ဤသို့ စသော လောက ဓမ္မယတြာ ကို ပြုခြင်းကြောင့် လွန်သည်မရှိ ကင်းပျောက်ကုန်၏။
“ငါ့အား အ,ကုသိုလ် ကံအကျိုးပေးလို၍ မကောင်းသောအိပ်မက် စသည်တို့ မြင်လာကုန်သည် ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို၍ ကောင်းသော အိပ်မက် စသည်တို့ မြင်လာ ကုန်သည်။
ဤသို့ ပုဗ္ဗနိမိတ်အဖြစ်ဖြင့် ကံကို အရင်းထား၍ ယုံကြည်ရ မည်”ဟု ပညာရှိတို့ မိန့်တော်မူကြ၏။
ထို့ကြောင့် အိပ်မက်များအားကံကို အရင်းထား၍ ယုံကြည်ကြသည်ရှိသောအခါကောင်းကျိုးနိမိတ်များဖြစ်ပါကကိုယ်တိုင်သာခံစားရပေမည်။
မြင်ဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။
ကြားဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။
ခံစားဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။
ကြုံဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။
ဖြစ်ဖူးသည်ကို စွဲ၍မက်မူ အကျိုးအပြစ်ရှိ၏။
အရုဏ်တက် မက်မူ အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။
ပထမယံမက်မူ တစ်နှစ်အတွင်း အကျိုးပေးအံ့။
ဒုတိယံမက်မူ ခြောက်လအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။
တတိယံမက်မူ သုံးလအတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။
စတုတ္ထယံမက်မူ ဆယ်ရက်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။
အရုဏ်တက် မက်မူ ဆယ်ရက်အတွင်း အကျိုးအပြစ်ပေးအံ့။
တနင်္ဂနွေမက်မူ မယားအတွက် မက်သည်။
တနင်္လာနေ့မက်မူ ဆွေမျိုးအတွက် မက်သည်။
အင်္ဂါနေ့မက်မူ မိဘ၊ ဆရာသမားအတွက် မက်သည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မက်မူ သားသမီးအတွက် မက်သည်။
ကြာသပတေးနေ့မက်မူ အဆွေခင်ပွန်းအတွက် မက်သည်။
သောကြာနေ့မက်မူ ကျွန်၊ ကျွဲ၊ နွားအတွက် မက်သည်။
စနေနေ့မက်မူ ကိုယ့်အတွက် မက်သည်။
အိပ်မက်ကောင်းသည် ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ နံနက်အခါ မြော်မြင်တတ်သူထံ ပြန်ကြားရာ၏။
အိပ်မက်ကောင်းမူဘုရားကို မီးပူဇော်၍ အိပ်မက်ကို ရွေးရာ၏။ အသက်ရှည်၍ ဘုန်းကြီးပြီး စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် ပြည့်စုံလိုပါ၏ဟုဆုတောင်းရာ၏။
အိပ်မက်ကောင်းမက်မူ ဆရာသမားတို့ကို ပူဇော်၍ ပြန်ကြားရာ၏။မကောင်းမက်မူ ထမင်းတစ်ဆုပ်၊ ရေတစ်မှုတ်နှင့် သစ်ငုတ်တိုတွင် တင်ခဲ့၍ကောင်းသောအရသာ တစ်ပါးပါးစား၍ ပြန်ရာ၏။
အိပ်မက်မကောင်းသော သူသည် ပရိတ်တော်ရေ ခံ၍ ခေါင်းဆေးရာ၏။ သစ်ငုတ်၊ ရေချမ်း၊ ထီး၊ တံခွန်၊ ပန်းတို့ဖြင့် ဘုရားပုထိုးကို ပူဇော်ရာ၏ ဗောဓိညောင်ကို ထောက်ရာ၏။
အင်္ကုရ ရသေ့ တိတံ္ထုကျမ်း၌ မကောင်းသောအိပ်မက်တို့ကို မြင်မက်ခဲ့လျှင် ရတနာသုံးပါး မိဘ, ဆရာသမားတို့အား ပူဇော်ကန်တော့ခြင်း၊ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်ရသည် ။
အိမျမကျ အကွောငျး တဈစတေ့ဈစောငျး
အိပျမကျကို လူတိုငျးမကျဖူးကွသညျ သို့သျော မိမိတို့ အိပျမကျ၏ကောငျးကြိုး ဆိုး ကြိုးကို ကွိုတငျ၍ သတိမထားသညျ့အတှကျ အကြိုးခံစားသငျ့သော အရာ မြားလှဲခြျောသှားသညျလညျး ရှိပသေညျ။
မကောငျးကြိုးကို မခံစားရမီ ကွိုတငျ၍ နိမိတျအနအေထားအားဖွငျ့ အိပျမကျမွငျမကျသညျဖွဈလကျြ မိမိတို့၏ အိပျမကျကို သတိမမူ၍ ဖွဈစေ၊ အဓိပ်ပာယျကို နားမလညျ၍ဖွဈစေ အမှုမဲ့ အမှတျမဲ့နသေညျ့အတှကျ ဒုက်ခမတှသေ့ငျ့ပဲနှငျ့ တှရေ့တတျသညျ။
ဓာတျလခြေောကျခြား၍ မွငျမကျခွငျးသညျလညျး ရှိတတျ၏ ထိုအိပျမကျကို အမှနျမယူနိုငျပါ။အကယျ၍ ပုဗ်ဗနိမိတျအဖွဈဖွငျ့ မွငျမကျသညျဟု ယူဆမိလြှငျ မိမိမွငျမကျသော အိပျမကျ၏ ကောငျးကြိုး ဆိုးပွဈကို ဝဖေနျတတျသူကို ရှာ၍ ထိုသူအား ပွောပွရမညျ။
သို့မဟုတျ အိပျမကျဆိုငျရာ ကမျြးစာအုပျ တို့ကို ဖတျ၍ ဝဖေနျကောကျခကျြခပြွီးလြှငျ ကောငျးကြိုးပေးမညျ့အိပျမကျဖွဈက ပေး ရနျ အခြိနျကာလကို စောငျ့ဆိုငျးလကျြအထူး သတိနှငျ့ နရေမညျ။
ဆိုးကြိုးပေးမညျ့ အိပျမကျဖွဈက ထိုပေးလတ်တံ့သော အကြိုးကို မပေးရနျ အဟောသိ ကံ ဖွဈသှားအောငျ ရတနာသုံးပါး၊ ဆရာသမား၊ ဘိုးဘှားမိဘတို့ကိုကိုးကှယျ ဆညျးကပျ၍ ယတွာမြားဆငျရပမေညျ။
ဤသို့ ညှနျပွအပျသညျ့အတိုငျး အိပျမကျမွငျမကျတိုငျး ဂရုပွုရနျ သတိရှိကွစလေိုသညျ ဤသို့ ကမျြး အစောငျစောငျတို့ အဆိုမတူညီကွသျောလညျး အိပျမကျမကောငျး ထငျမွငျလကျြ
မကျသညျ့အခြိနျအခါ နေ့၌ မကျသော အိပျမကျဖွဈစေ ‘ယတွာကောငျးက မငျးလောငျးပြျောက’ ဆိုသကဲ့သို့ ဆေးရှဈပါးဖွငျ့ ခေါငျးေ ဆးခွငျးကိုလညျးကောငျး၊ ဘုရားပုထိုးရှိခိုးခွငျး၊ နံ့သာပနျးတို့ဖွငျ့ သကျစပေူ့ဇျောခွငျး၊
တွိရနျး, စတုနျရနျး, နံ့သငျ့သဈသား တို့ကို အောကျ ခံပွု၍ ခေါငျးဆေးခွငျးကိုလညျးကောငျး ဤသို့ စသော လောက ဓမ်မယတွာ ကို ပွုခွငျးကွောငျ့ လှနျသညျမရှိ ကငျးပြောကျကုနျ၏။
“ငါ့အား အ,ကုသိုလျ ကံအကြိုးပေးလို၍ မကောငျးသောအိပျမကျ စသညျတို့ မွငျလာကုနျသညျ ကုသိုလျကံအကြိုးပေးလို၍ ကောငျးသော အိပျမကျ စသညျတို့ မွငျလာ ကုနျသညျ။
ဤသို့ ပုဗ်ဗနိမိတျအဖွဈဖွငျ့ ကံကို အရငျးထား၍ ယုံကွညျရ မညျ”ဟု ပညာရှိတို့ မိနျ့တျောမူကွ၏။
ထို့ကွောငျ့ အိပျမကျမြားအားကံကို အရငျးထား၍ ယုံကွညျကွသညျရှိသောအခါကောငျးကြိုးနိမိတျမြားဖွဈပါကကိုယျတိုငျသာခံစားရပမေညျ။
မွငျဖူးသညျကို စှဲ၍မကျမူ အကြိုးအပွဈရှိ၏။
ကွားဖူးသညျကို စှဲ၍မကျမူ အကြိုးအပွဈရှိ၏။
ခံစားဖူးသညျကို စှဲ၍မကျမူ အကြိုးအပွဈရှိ၏။
ကွုံဖူးသညျကို စှဲ၍မကျမူ အကြိုးအပွဈရှိ၏။
ဖွဈဖူးသညျကို စှဲ၍မကျမူ အကြိုးအပွဈရှိ၏။
အရုဏျတကျ မကျမူ အကြိုးအပွဈပေးအံ့။
ပထမယံမကျမူ တဈနှဈအတှငျး အကြိုးပေးအံ့။
ဒုတိယံမကျမူ ခွောကျလအတှငျး အကြိုးအပွဈပေးအံ့။
တတိယံမကျမူ သုံးလအတှငျး အကြိုးအပွဈပေးအံ့။
စတုတ်ထယံမကျမူ ဆယျရကျအတှငျး အကြိုးအပွဈပေးအံ့။
အရုဏျတကျ မကျမူ ဆယျရကျအတှငျး အကြိုးအပွဈပေးအံ့။
တနင်ျဂနှမေကျမူ မယားအတှကျ မကျသညျ။
တနင်ျလာနမေ့ကျမူ ဆှမြေိုးအတှကျ မကျသညျ။
အင်ျဂါနမေ့ကျမူ မိဘ၊ ဆရာသမားအတှကျ မကျသညျ။
ဗုဒ်ဓဟူးနမေ့ကျမူ သားသမီးအတှကျ မကျသညျ။
ကွာသပတေးနမေ့ကျမူ အဆှခေငျပှနျးအတှကျ မကျသညျ။
သောကွာနမေ့ကျမူ ကြှနျ၊ ကြှဲ၊ နှားအတှကျ မကျသညျ။
စနနေမေ့ကျမူ ကိုယျ့အတှကျ မကျသညျ။
အိပျမကျကောငျးသညျ ဖွဈစေ၊ မကောငျးသညျဖွဈစေ နံနကျအခါ မွျောမွငျတတျသူထံ ပွနျကွားရာ၏။
အိပျမကျကောငျးမူဘုရားကို မီးပူဇျော၍ အိပျမကျကို ရှေးရာ၏။ အသကျရှညျ၍ ဘုနျးကွီးပွီး စညျးစိမျဥစ်စာနှငျ့ ပွညျ့စုံလိုပါ၏ဟုဆုတောငျးရာ၏။
အိပျမကျကောငျးမကျမူ ဆရာသမားတို့ကို ပူဇျော၍ ပွနျကွားရာ၏။မကောငျးမကျမူ ထမငျးတဈဆုပျ၊ ရတေဈမှုတျနှငျ့ သဈငုတျတိုတှငျ တငျခဲ့၍ကောငျးသောအရသာ တဈပါးပါးစား၍ ပွနျရာ၏။
အိပျမကျမကောငျးသော သူသညျ ပရိတျတျောရေ ခံ၍ ခေါငျးဆေးရာ၏။ သဈငုတျ၊ ရခေမျြး၊ ထီး၊ တံခှနျ၊ ပနျးတို့ဖွငျ့ ဘုရားပုထိုးကို ပူဇျောရာ၏ ဗောဓိညောငျကို ထောကျရာ၏။
အင်ျကုရ ရသေ့ တိတ်ထုံကမျြး၌ မကောငျးသောအိပျမကျတို့ကို မွငျမကျခဲ့လြှငျ ရတနာသုံးပါး မိဘ, ဆရာသမားတို့အား ပူဇျောကနျတော့ခွငျး၊ ဥပုသျသီလဆောကျတညျရသညျ ။
Author adminPosted on October 6, 2019 Categories Horoscope, Knowledge, သုတစာပေ
နေ့နံအလိုက် မတူညီကြတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ အမူအကျင့်များ
လူတော်တော်များများက တစ်ယောက်ယောက်ကို တွေ့တဲ့အခါ စကားများလိုက်တာ သောကြာလား၊ ဒေါသကြီးတယ် စနေလား စသဖြင့် မေးတတ်ကြပါတယ်။
အဲ့ဒီလို အသွင်အပြင်၊ အမူအကျင့်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်မွေးတဲ့နေ့ကို တကယ်ခန့်မှန်းလို့ရနိုင်သလား ဆိုတာ သေချာသိရအောင် မွေးတဲ့နေ့နံအလိုက် ရှိနေကြတဲ့ အသွင်အပြင်နဲ့ အမူအကျင့်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1 ~ တနင်္ဂနွေ နေ့ဖွား
ကံကောင်းတဲ့သူလေးတွေ၊ လူတွေအလယ် ထင်ရှားနေတတ်တဲ့သူလေးတွေကတော့ တနင်္ဂနွေသားသမီးလေးတွေပါ။
ဖန်တီးနိုင်စွမ်း အရမ်းကောင်းတယ်၊ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ ဦးဆောင်သူတစ်ယောက်၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီး လမ်းမှားရောက်နေတဲ့သူတွေကို လမ်းမှန်ရောက်အောင် ပြန်ပြီးတွန်းပို့ပေးနိုင်တဲ့ သူလေးတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
2 ~ တနင်္လာ နေ့ဖွား
တနင်္လာနေ့မှာ မွေးတဲ့သူလေးတွေက ကြင်နာတတ်တယ်၊ လူကြီးဆန်တယ်၊ ရုပ်ရည်သွင်ပြင်က ဘာမှထွေထွေထူးထူးပြင်ဆင်မထားတာတောင် ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့သူလေးတွေပေါ့။
တည်ငြိမ်ပြီး လူကြီးဆန်တဲ့ ၊ နွေးထွေးတဲ့ တနင်္လာသားသမီးလေးတွေဟာ ဘယ်ပဲသွားသွား လူချစ်လူခင်လည်းများတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။
3 ~ အင်္ဂါ နေ့ဖွား
ရဲရင့်ပြီး ကြောက်စိတ်မရှိတဲ့၊ စိတ်မရှည်တတ်တဲ့၊ တဲ့တိုးစကားတွေပဲပြောတတ်တဲ့၊ အမြဲလိုလို တက်ကြွပြီး အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူလေးတွေပါ။
သူတို့ကိုကြည့်လိုက်ရင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
4 ~ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့ဖွား
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အရမ်းကောင်းပြီး လူတိုင်းနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်းနိုင်တဲ့သူ၊ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာ စိတ်ရှည်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူ ။
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း နေတတ်တဲ့သူလေးတွေကတော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မွေးတဲ့သူလေးတွေပါ။
5 ~ ကြာသပတေး နေ့ဖွား
ကြာသပတေးနေ့မှာ မွေးတဲ့သူလေးတွေက ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်၊ ပူပင်သောကတွေကို ခေါင်းထဲသိပ်မထည့်တတ်ဘူး၊ တစ်ယောက်တည်းနေရတာထက် သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း နေရတာ ပိုကြိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ ရပ်တန့်မနေဘဲ အမြဲတမ်းတိုးတက်အောင် ကြိုးစားချင်စိတ် ရှိကြသူလေးတွေပါ။
6 ~ သောကြာ နေ့ဖွား
သောကြာတွေက ချစ်တတ်တယ်၊ မျှဝေတတ်တယ်၊ အလှအပအရမ်းကြိုက်တယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်၊ အထက်တန်းကျတဲ့ ပုံစံမျိုးနေချင်တယ်၊ စိတ်ချမ်းသာဖို့ ဦးစားပေးတတ်တယ်။
အနုပညာအမြင် ရှိပြီး လူချစ်လူခင်များတဲ့သူလေးတွေ၊ အတ္တကြီးတဲ့ တစ်ကိုယ်ကောင်းသမားတွေကိုတောင် ပြောင်းလဲလာအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
7 ~ စနေ နေ့ဖွား
စနေနေ့မှာမွေးတဲ့သူတွေက လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးတယ်၊ အဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာရင်လည်း ခဏပဲ၊ ပြန်အဆင်ပြေသွားတယ်၊ အပင်စိုက်ရတာကို သဘောကျတယ်၊
သူများထက် အောက်ကျနောက်ကျနိုင်တဲ့ ဘ၀မျိုးမလိုချင်လို့ အမြဲလိုလို ကြိုးစားနေတတ်ကြတယ်၊ ပညာလေ့လာဆည်းပူးတဲ့နေရာမှာ စိတ်အားထက်သန်တဲ့သူလေးတွေ ဘ၀ ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူတွေပါ။
နနေံ့အလိုကျ မတူညီကွတဲ့ အသှငျအပွငျနဲ့ အမူအကငျြ့မြား
လူတျောတျောမြားမြားက တဈယောကျယောကျကို တှတေဲ့အခါ စကားမြားလိုကျတာ သောကွာလား၊ ဒေါသကွီးတယျ စနလေား စသဖွငျ့ မေးတတျကွပါတယျ။
အဲ့ဒီလို အသှငျအပွငျ၊ အမူအကငျြ့လေးတှကေိုကွညျ့ပွီး ကိုယျမှေးတဲ့နကေို့ တကယျခနျ့မှနျးလို့ရနိုငျသလား ဆိုတာ သခြောသိရအောငျ မှေးတဲ့နနေံ့အလိုကျ ရှိနကွေတဲ့ အသှငျအပွငျနဲ့ အမူအကငျြ့လေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
1 ~ တနင်ျဂနှေ နဖှေ့ား
ကံကောငျးတဲ့သူလေးတှေ၊ လူတှအေလယျ ထငျရှားနတေတျတဲ့သူလေးတှကေတော့ တနင်ျဂနှသေားသမီးလေးတှပေါ။
ဖနျတီးနိုငျစှမျး အရမျးကောငျးတယျ၊ အသငျးအဖှဲ့တဈခုရဲ့ ဦးဆောငျသူတဈယောကျ၊ ခေါငျးဆောငျကောငျးတဈယောကျလညျးဖွဈပွီး လမျးမှားရောကျနတေဲ့သူတှကေို လမျးမှနျရောကျအောငျ ပွနျပွီးတှနျးပို့ပေးနိုငျတဲ့ သူလေးတှလေညျး ဖွဈပါတယျ ။
2 ~ တနင်ျလာ နဖှေ့ား
တနင်ျလာနမှေ့ာ မှေးတဲ့သူလေးတှကေ ကွငျနာတတျတယျ၊ လူကွီးဆနျတယျ၊ ရုပျရညျသှငျပွငျက ဘာမှထှထှေထေူးထူးပွငျဆငျမထားတာတောငျ ဆှဲဆောငျမှုရှိနတေဲ့သူလေးတှပေေါ့။
တညျငွိမျပွီး လူကွီးဆနျတဲ့ ၊ နှေးထှေးတဲ့ တနင်ျလာသားသမီးလေးတှဟော ဘယျပဲသှားသှား လူခဈြလူခငျလညျးမြားတဲ့သူလေးတှဖွေဈပါတယျ။
3 ~ အင်ျဂါ နဖှေ့ား
ရဲရငျ့ပွီး ကွောကျစိတျမရှိတဲ့၊ စိတျမရှညျတတျတဲ့၊ တဲ့တိုးစကားတှပေဲပွောတတျတဲ့၊ အမွဲလိုလို တကျကွှပွီး အရာရာကိုရငျဆိုငျနိုငျတဲ့သူလေးတှပေါ။
သူတို့ကိုကွညျ့လိုကျရငျ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုကျတတျတဲ့ပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။
4 ~ ဗုဒ်ဓဟူး နဖှေ့ား
ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး အရမျးကောငျးပွီး လူတိုငျးနဲ့ တညျ့အောငျပေါငျးနိုငျတဲ့သူ၊ သူငယျခငျြးတှအေပျေါမှာ စိတျရှညျပွီး ကိုယျခငျြးစာစိတျအပွညျ့ရှိတဲ့သူ ။
ကိုယျ့စိတျထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုငျး နတေတျတဲ့သူလေးတှကေတော့ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ မှေးတဲ့သူလေးတှပေါ။
5 ~ ကွာသပတေး နဖှေ့ား
ကွာသပတေးနမှေ့ာ မှေးတဲ့သူလေးတှကေ ပြျောပြျောနတေတျတယျ၊ ပူပငျသောကတှကေို ခေါငျးထဲသိပျမထညျ့တတျဘူး၊ တဈယောကျတညျးနရေတာထကျ သူငယျခငျြးတှေ၊ မိသားစုတှနေဲ့ သိုကျသိုကျဝနျးဝနျး နရေတာ ပိုကွိုကျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ။
ကိုယျရောကျနတေဲ့နရောမှာ ရပျတနျ့မနဘေဲ အမွဲတမျးတိုးတကျအောငျ ကွိုးစားခငျြစိတျ ရှိကွသူလေးတှပေါ။
6 ~ သောကွာ နဖှေ့ား
သောကွာတှကေ ခဈြတတျတယျ၊ မြှဝတေတျတယျ၊ အလှအပအရမျးကွိုကျတယျ၊ စိတျကူးယဉျဆနျတယျ၊ အထကျတနျးကတြဲ့ ပုံစံမြိုးနခေငျြတယျ၊ စိတျခမျြးသာဖို့ ဦးစားပေးတတျတယျ။
အနုပညာအမွငျ ရှိပွီး လူခဈြလူခငျမြားတဲ့သူလေးတှေ၊ အတ်တကွီးတဲ့ တဈကိုယျကောငျးသမားတှကေိုတောငျ ပွောငျးလဲလာအောငျ လုပျနိုငျစှမျးရှိတဲ့သူတှဆေိုလညျး မမှားပါဘူး။
7 ~ စနေ နဖှေ့ား
စနနေမှေ့ာမှေးတဲ့သူတှကေ လှတျလပျမှုကိုမွတျနိုးတယျ၊ အဆငျမပွမှေုတှကွေုံလာရငျလညျး ခဏပဲ၊ ပွနျအဆငျပွသှေားတယျ၊ အပငျစိုကျရတာကို သဘောကတြယျ၊
သူမြားထကျ အောကျကနြောကျကနြိုငျတဲ့ ဘဝမြိုးမလိုခငျြလို့ အမွဲလိုလို ကွိုးစားနတေတျကွတယျ၊ ပညာလလေ့ာဆညျးပူးတဲ့နရောမှာ စိတျအားထကျသနျတဲ့သူလေးတှေ ဘ၀ ကို ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွတျသနျးနတေဲ့သူတှပေါ။
Author adminPosted on October 5, 2019 Categories Knowledge, သုတစာပေ, ဗေဒင် လက္ခဏာ
ရဟန်းတော်ပေါင်း ၂ သိန်းကျော်ရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို မြုပ်နှံထားတဲ့ သင်္ချိုင်း
သင်္ချိုင်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ပိုင်းက ဝါကာယမစီရင်စုထဲမှာ တည်ရှိတဲ့ အိုကူနိုအင် (Okunoin) သင်္ချိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
Koya မြို့အနီး တောင်ပေါ်က တောအုပ်ထဲမှာ ရှိနေပြီး ဒီနေရာမှာ ဘုရားကျောင်းတွေအဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကတော့ ရှင်ဂွန်ဗုဒ္ဓဘာသာ တည်ထောင်သူ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီဟာ Koyasan နယ်မြေကို ရှင်ဂွန်းဗုဒ္ဓဘာသာ စတင်ခဲ့ရာနေရာအဖြစ် အေဒီ ၈၁၆ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အဲဒီနေရာမှာ ရှေးဟောင်း ဘုရားကျောင်းဆောင်ပေါင်း ၁၂၀ ခန့်ရှိနေပါတယ် ။
အေဒီ ၈၃၅ မှာ ပျံလွန်တော်မှုခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီက စလို့ အစဉ်အဆက် ဘုန်းတော်ကြီးတွေ မြုပ်နှံခဲ့ရာ အိုကူနိုအင် သင်္ချိုင်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ရှေးအကျဆုံး နဲ့ အကြီးဆုံး သင်္ချိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်္ချိုင်းမှာ ရဟန်းတော်ပေါင်း ၂ သိန်းကျော်ကို မြုပ်နှံထားပြီး ဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုရင် သင်္ချိုင်းလျှောက်လမ်းရဲ့ အရှည်တင် ၂ကီလိုမီတာ ကျော်ကျော်ရှိနေပါတယ်။
တိတ်ဆိတ်လှတဲ့ ဒီနေရာဟာ သက်တမ်းရာချီနေပြီဖြစ်တဲ့ သစ်ကတိုးပင်တွေကြားထဲမှာ ရှိနေတာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းဖွယ်ရှိပေမယ့် ။
မျက်စိတဆုံး ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သင်္ချိုင်း ကဗ္ပည်းကျောက်တိုင်တွေ၊ ရုပ်တုတွေကြောင့် အနည်းငယ် ထိတ်လန့်စရာ တော့ကောင်းပါတယ်။
လျှောက်လမ်းရဲ့ အဆုံးမှာတော့ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီ ရဲ့ ဂူဗိမာန်ရှိနေပါတယ် ရှင်ဂွန်ဘာသာရဲ့ အယူအဆအရ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီ နဲ့ အတူ ဘုန်းတော်ကြီးပေါင်းများစွာဟာ သေဆုံးသွားခြင်းမဟုတ်ပဲ ။
နောင်ပွင့်မယ့် အရိမေတ္တယျဘုရားကို တရားအားထုတ်ရင်း စောင့်မျှော်နေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီ ရဲ့ ဂူဗိမာန်ရှေ့မှာတော့ Torodo ဆိုတဲ့ ခန်းမတစ်ခု ရှိနေပါတယ် အဲဒီခန်းမထဲမှာတော့ အလှူရှင်တွေလှူဒါန်းထားတဲ့ မီးအိမ်ပေါင်း ၁သောင်းကျော် ရှိနေပါတယ်။
မီးအိမ်တွေကို နေ့ညမပြတ်ထွန်းထားတာဖြစ်ပြီး ဒီအထဲက မီးအိမ် ၂ ခု ဆိုရင် ဆက်တိုက်ထွန်းညှိခဲ့တာ အေဒီ ၁၁ရာစုကတည်းကလို့ အစဉ်အဆက်ပြောဆိုလေ့ ရှိကြပါတယ်။
ဒီသင်္ချိုင်းကို သွားရောက်လည်ပတ်မယ်ဆိုရင် သင်္ချိုင်းရဲ့အဝမှာရှိတဲ့ Ichinohashi တံတားကို မဖြတ်ခင် အရိုအသေပေးတဲ့ အနေနဲ့ ဦးညွှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ အရှည် ၂ကီလိုမီတာ ရှည်တဲ့ လျှောက်လမ်းကနေ သင်္ချိုင်းကို ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီး များပြားလွန်းတဲ့ သင်္ချိုင်းဂူတွေကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူစည်ကားတဲ့နေရာဖြစ်ပေမယ့် ဆူညံမှုကို တားမြစ်ထားတာကြောင့် ကျေးငှက်မြည်သံတွေကိုပဲ ကြားရမှာပါ။
လျှောက်လမ်းရဲ့အဆုံးမှာတော့ ဘုန်းတော်ကြီး ကိုဗိုဒါရှီ ရဲ့ ဂူဗိမာန် ကို မဝင်ခင် Gobyobashi ဆိုတဲ့ တံတားနောက်ထပ် တစ်စင်းရှိနေပါသေးတယ်။
ယင်းတံတားကို မဖြတ်မီမှာ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတွေကို ရေသပ္ပါယ်ရပါတယ် ဒါမှသာ ဂူဗိမာန်ထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်မှာပါ အဲဒီနေရာမှာတော အစားအစာ ရေ တို့ကို ယူဆောင်လာခြင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းတွေကို တားမြစ်ထားပါတယ်။
ဂူဗိမာန်အတွင်းမှာတော့ ရှင်ဂွန်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ ရုပ်တုတွေရှိနေပါတယ် ဒီ အိုကူနိုအင် သင်္ချိုင်းဟာ Kii Mountain ထဲက ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားတဲ့ နေရာတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအဝင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်္ချိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာတော့ လာရောက်လည်ပတ်သူခရီးသွားတွေ၊ ဘုရားဖူးတွေနဲ့ အမြဲမပြတ်စည်ကား လျှက်ရှိပါတယ်။
ရဟနျးတျောပေါငျး ၂ သိနျးကြျောရဲ့ ရုပျအလောငျးကို မွုပျနှံထားတဲ့ သင်ျခြိုငျး
သင်ျခြိုငျးကတော့ ဂပြနျနိုငျငံ တိုကြိုမွို့ရဲ့တောငျပိုငျးက ဝါကာယမစီရငျစုထဲမှာ တညျရှိတဲ့ အိုကူနိုအငျ (Okunoin) သင်ျခြိုငျးဖွဈပါတယျ။
Koya မွို့အနီး တောငျပျေါက တောအုပျထဲမှာ ရှိနပွေီး ဒီနရောမှာ ဘုရားကြောငျးတှအေဖွဈ စတငျတညျထောငျခဲ့သူကတော့ ရှငျဂှနျဗုဒ်ဓဘာသာ တညျထောငျသူ ဘုနျးတျောကွီး ကိုဗိုဒါရှီ ဖွဈပါတယျ။
ဘုနျးတျောကွီး ကိုဗိုဒါရှီဟာ Koyasan နယျမွကေို ရှငျဂှနျးဗုဒ်ဓဘာသာ စတငျခဲ့ရာနရောအဖွဈ အဒေီ ၈၁၆ခုနှဈကတညျးက စတငျတညျထောငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ အဲဒီနရောမှာ ရှေးဟောငျး ဘုရားကြောငျးဆောငျပေါငျး ၁၂၀ ခနျ့ရှိနပေါတယျ ။
အဒေီ ၈၃၅ မှာ ပြံလှနျတျောမှုခဲ့တဲ့ ဘုနျးတျောကွီး ကိုဗိုဒါရှီက စလို့ အစဉျအဆကျ ဘုနျးတျောကွီးတှေ မွုပျနှံခဲ့ရာ အိုကူနိုအငျ သင်ျခြိုငျးဟာ ဂပြနျနိုငျငံရဲ့ ရှေးအကဆြုံး နဲ့ အကွီးဆုံး သင်ျခြိုငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီသင်ျခြိုငျးမှာ ရဟနျးတျောပေါငျး ၂ သိနျးကြျောကို မွုပျနှံထားပွီး ဘယျလောကျကွီးသလဲဆိုရငျ သင်ျခြိုငျးလြှောကျလမျးရဲ့ အရှညျတငျ ၂ကီလိုမီတာ ကြျောကြျောရှိနပေါတယျ။
တိတျဆိတျလှတဲ့ ဒီနရောဟာ သကျတမျးရာခြီနပွေီဖွဈတဲ့ သဈကတိုးပငျတှကွေားထဲမှာ ရှိနတောကွောငျ့ ငွိမျးခမျြးဖှယျရှိပမေယျ့ ။
မကျြစိတဆုံး ထိုးထိုးထောငျထောငျဖွဈနတေဲ့ သင်ျခြိုငျး ကဗ်ပညျးကြောကျတိုငျတှေ၊ ရုပျတုတှကွေောငျ့ အနညျးငယျ ထိတျလနျ့စရာ တော့ကောငျးပါတယျ။
လြှောကျလမျးရဲ့ အဆုံးမှာတော့ ဘုနျးတျောကွီး ကိုဗိုဒါရှီ ရဲ့ ဂူဗိမာနျရှိနပေါတယျ ရှငျဂှနျဘာသာရဲ့ အယူအဆအရ ဘုနျးတျောကွီး ကိုဗိုဒါရှီ နဲ့ အတူ ဘုနျးတျောကွီးပေါငျးမြားစှာဟာ သဆေုံးသှားခွငျးမဟုတျပဲ ။
နောငျပှငျ့မယျ့ အရိမတ်ေတယဘြုရားကို တရားအားထုတျရငျး စောငျ့မြှျောနတေယျလို့ ယုံကွညျကွပါတယျ။
ဘုနျးတျောကွီး ကိုဗိုဒါရှီ ရဲ့ ဂူဗိမာနျရှမှေ့ာတော့ Torodo ဆိုတဲ့ ခနျးမတဈခု ရှိနပေါတယျ အဲဒီခနျးမထဲမှာတော့ အလှူရှငျတှလှေူဒါနျးထားတဲ့ မီးအိမျပေါငျး ၁သောငျးကြျော ရှိနပေါတယျ။
မီးအိမျတှကေို နညေ့မပွတျထှနျးထားတာဖွဈပွီး ဒီအထဲက မီးအိမျ ၂ ခု ဆိုရငျ ဆကျတိုကျထှနျးညှိခဲ့တာ အဒေီ ၁၁ရာစုကတညျးကလို့ အစဉျအဆကျပွောဆိုလေ့ ရှိကွပါတယျ။
ဒီသင်ျခြိုငျးကို သှားရောကျလညျပတျမယျဆိုရငျ သင်ျခြိုငျးရဲ့အဝမှာရှိတဲ့ Ichinohashi တံတားကို မဖွတျခငျ အရိုအသပေေးတဲ့ အနနေဲ့ ဦးညှတျရမှာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီနောကျတော့ အရှညျ ၂ကီလိုမီတာ ရှညျတဲ့ လြှောကျလမျးကနေ သင်ျခြိုငျးကို ဖွတျရမှာဖွဈပွီး မြားပွားလှနျးတဲ့ သင်ျခြိုငျးဂူတှကေို ပုံစံအမြိုးမြိုးနဲ့ တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
လူစညျကားတဲ့နရောဖွဈပမေယျ့ ဆူညံမှုကို တားမွဈထားတာကွောငျ့ ကြေးငှကျမွညျသံတှကေိုပဲ ကွားရမှာပါ။
လြှောကျလမျးရဲ့အဆုံးမှာတော့ ဘုနျးတျောကွီး ကိုဗိုဒါရှီ ရဲ့ ဂူဗိမာနျ ကို မဝငျခငျ Gobyobashi ဆိုတဲ့ တံတားနောကျထပျ တဈစငျးရှိနပေါသေးတယျ။
ယငျးတံတားကို မဖွတျမီမှာ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဗုဒ်ဓဆငျးတုတှကေို ရသေပ်ပါယျရပါတယျ ဒါမှသာ ဂူဗိမာနျထဲကို ဝငျရောကျနိုငျမှာပါ အဲဒီနရောမှာတော အစားအစာ ရေ တို့ကို ယူဆောငျလာခွငျး ဓာတျပုံရိုကျခွငျးတှကေို တားမွဈထားပါတယျ။
ဂူဗိမာနျအတှငျးမှာတော့ ရှငျဂှနျဗုဒ်ဓဘာသာဆိုငျရာ ရုပျတုတှရှေိနပေါတယျ ဒီ အိုကူနိုအငျ သင်ျခြိုငျးဟာ Kii Mountain ထဲက ကမ်ဘာ့အမှအေနှဈနရောအဖွဈ သတျမှတျခံထားတဲ့ နရောတှထေဲမှာ တဈခုအပါအဝငျလညျးဖွဈပါတယျ။
သင်ျခြိုငျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ လာရောကျလညျပတျသူခရီးသှားတှေ၊ ဘုရားဖူးတှနေဲ့ အမွဲမပွတျစညျကား လြှကျရှိပါတယျ။
Author adminPosted on October 4, 2019 Categories Knowledge, ဘာသာရေး, သုတစာပေ
အိမ်မှာ ကြွက်သောင်းကျန်းနေရင် ဒီလိုလုပ်ကြည့်နော်
အစားအစာရှိတဲ့နေရာမှာ ကြွက်တွေ ပျော်ကြပါတယ် အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် အစား အစာ လွယ်ကူတဲ့နေရာမျိုးဆို မိသားစုလိုက် အုပ်လိုက်ကျင်းလိုက် နေတတ်ပါတယ်။
ကြွက်က လူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ အားလုံး သိပြီးသားပါ တစ်ချို့က ကြွက်ကို ထောင်ခြောက်နဲ့ဖမ်းပြီး သတ်ကြပါတယ်။
ဒါကတော့ အကုသိုလ်များတဲ့ နည်းပေါ့ အကုသိုလ်ကင်းကင်းနဲ့ အိမ်မှာ ကြွက်မနေနိုင်အောင် လုပ်ဖို့ Shwemom က အလွယ်ဆုံးနည်းတွေကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
ဂွမ်းစတွေကို အလုံးကလေးတွေ လုံးပြီး ငရုတ်ဆီနဲ့ ဆွတ်ကာ ကြွက်တွေ ကြင်လည်ရာ နေရာတစ်လျှောက်မှာ ချထားလိုိက်ပါ ကြွက် တွေက ငရုတ်ဆီိကို ကြောက်ကြပါတယ်။
ကြွက်တွေ မခံနိုင်တဲ့ အနံ့ထဲမှာတော့ လေညှင်းနံ့လည်း ပါဝင်ပါတယ် လေညှင်းနံ့ နံတဲ့နေရာဆိုရင် ကြွက်တွေက နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မလာတော့ဘူးလို့တောင် သိရပါတယ်။
လေညှင်းပွင့် လေညှင်းဆီကတော့ အိမ်အတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် အိမ်လည်း ပေကျန်မှု မဖြစ်တဲ့အပြင်၊ လူတွေ ကိုင်မိရင်လည်း ပူလောင်ခြင်း စသည်တို့ မဖြစ်စေပါဘူး။
ပရုတ်လုံးထည့်တဲ့ သေတ္တာလေးထဲမှာ ကြွက်နေတတ်တဲ့နေရာနဲ့ ကြွက်ရောက်တတ်တဲ့ နေရာတွေမှာ ချထားလိုက်ပါ။
ကြွက်တွေ အိမ်ဘက်ကိုတောင် ခြေဦးမလှည့်စေတော့တဲ့အထိ ပရုတ်လုံးက စွမ်းပါတယ်။
ဆပ်ပြာမှုန့်ကို ရေနဲ့နှစ်ဆတစ်ဆ ရောစပ်ပြီး ဖျော်လိုက်ပါ ငရုတ်ဆီအနည်းငယ်ထည့်ပြီး Spray ဘူးထဲကို ထည့်ပြီး ကြွက်ရောက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြန်းပေးပါ။
သုံးလေးရက် တစ်ခါလောက်မှ ဒီနည်းကို သုံးလို့ရပါတယ် ဆပ်ပြာမှုန့်က ငရုတ်ဆီရဲ့ အရည်အသွေးကို သုံးလေးရက်လောက် ထိန်းပေးထားနိုင်လို့ စာရိတ်သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
အိမျမှာ ကွှကျသောငျးကနျြးနရေငျ ဒီလိုလုပျကွညျ့နျော
အစားအစာရှိတဲ့နရောမှာ ကွှကျတှေ ပြျောကွပါတယျ အထူးသဖွငျ့ ၎င်းငျးတို့အတှကျ အစား အစာ လှယျကူတဲ့နရောမြိုးဆို မိသားစုလိုကျ အုပျလိုကျကငျြးလိုကျ နတေတျပါတယျ။
ကွှကျက လူတှအေတှကျ ကနျြးမာရေးကို ထိခိုကျစနေိုငျတယျဆိုတာ အားလုံး သိပွီးသားပါ တဈခြို့က ကွှကျကို ထောငျခွောကျနဲ့ဖမျးပွီး သတျကွပါတယျ။
ဒါကတော့ အကုသိုလျမြားတဲ့ နညျးပေါ့ အကုသိုလျကငျးကငျးနဲ့ အိမျမှာ ကွှကျမနနေိုငျအောငျ လုပျဖို့ Shwemom က အလှယျဆုံးနညျးတှကေို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။
ဂှမျးစတှကေို အလုံးကလေးတှေ လုံးပွီး ငရုတျဆီနဲ့ ဆှတျကာ ကွှကျတှေ ကွငျလညျရာ နရောတဈလြှောကျမှာ ခထြားလိုကျပါ ကွှကျ တှကေ ငရုတျဆီကို ကွောကျကွပါတယျ။
ကွှကျတှေ မခံနိုငျတဲ့ အနံ့ထဲမှာတော့ လညှေငျးနံ့လညျး ပါဝငျပါတယျ လညှေငျးနံ့ နံတဲ့နရောဆိုရငျ ကွှကျတှကေ နောကျတဈကွိမျ ထပျမလာတော့ဘူးလို့တောငျ သိရပါတယျ။
လညှေငျးပှငျ့ လညှေငျးဆီကတော့ အိမျအတှကျ အကောငျးဆုံးဖွဈပါတယျ အိမျလညျး ပကေနျြမှု မဖွဈတဲ့အပွငျ၊ လူတှေ ကိုငျမိရငျလညျး ပူလောငျခွငျး စသညျတို့ မဖွဈစပေါဘူး။
ပရုတျလုံးထညျ့တဲ့ သတ်ေတာလေးထဲမှာ ကွှကျနတေတျတဲ့နရောနဲ့ ကွှကျရောကျတတျတဲ့ နရောတှမှော ခထြားလိုကျပါ။
ကွှကျတှေ အိမျဘကျကိုတောငျ ခွဦေးမလှညျ့စတေော့တဲ့အထိ ပရုတျလုံးက စှမျးပါတယျ။
ဆပျပွာမှုနျ့ကို ရနေဲ့နှဈဆတဈဆ ရောစပျပွီး ဖြျောလိုကျပါ ငရုတျဆီအနညျးငယျထညျ့ပွီး Spray ဘူးထဲကို ထညျ့ပွီး ကွှကျရောကျနိုငျတဲ့ နရောတှမှော ဖွနျးပေးပါ။
သုံးလေးရကျ တဈခါလောကျမှ ဒီနညျးကို သုံးလို့ရပါတယျ ဆပျပွာမှုနျ့က ငရုတျဆီရဲ့ အရညျအသှေးကို သုံးလေးရကျလောကျ ထိနျးပေးထားနိုငျလို့ စာရိတျသကျသာတဲ့ နညျးလမျးတဈခု ဖွဈပါတယျ ။
Author adminPosted on September 13, 2019 Categories Knowledge, သုတစာပေ
သင်္ကန်းဟာ မြင့်မြတ်ပါသလား ဘုရား?
” နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်ပါတယ်၊ မနိမ့်ဘူးထင်ရင် မနိမ့်ပါဘူး ” ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထဘီကြောင့် နိမ့်တာမဟုတ်ပဲ ” ထင် ” ဆိုတဲ့ ဥပါဒါန်ကြောင့်သာ နိမ့်သွားတယ်လို့ ထင်တာပါ။
ပိတ်စတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ ပိတ်စတစ်ခုဟာ သင့်ကို ဘယ်လိုများ ဒုက္ခရောက်စေမလဲ။
ဘုန်းနိမ့်တယ်ဆိုတာက သင်ထင်သလို မဟုတ်ပြန်ဘူး ‘ဘုန်းနိမ့်ပြီဟဲ့ ဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ဟာ negative feeling ဘက်ကို ရောက်သွားတယ်။
စိတ် အလိုမကျ ဖြစ်စေတယ် စိတ်ကို နောက်ကျိစေတယ် အဲဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ကျဆင်းခြင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ ..။
ဒါဆို အရှင်ဘုရားအနေနဲ့ ဝင်ခဲ့မိရင်ရော နိမ့်မှာလား ?
”အဓိပ္ပာယ်မဲ့ ထဘီတန်းအောက် ဝင်ဖို့ တော့ စိတ်ကူး မရှိဘူး လိုအပ်ခဲ့လို့ဝင်ရပြီဆိုလည်း ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့မယူဆပါဘူး။
ရဟန်းတစ်ပါးရဲ့ အစွမ်းအစဖြစ်တဲ့ သီလ , သမာဓိ , ပညာဟာ ဒီ ထဘီတန်းကြောင့် ကျဆင်းစရာ မရှိပါဘူး ”
သင်္ကန်းဟာ မြင့်မြတ်ပါသလား ဘုရား ?
” သင်္ကန်းက မြင့်မြတ်တာ မဟုတ်ပဲ သင်္ကန်းဝတ်ဆင်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က မြင့်မြတ်နေတာပါ -ဒကာ။
‘ဘာရည်ရွယ်ချက်မို့လို့လဲ ဘုရား ‘
” ရောင့်ရဲ ခြိုးခြံလိုခြင်း ”
”တပည့်တော် ကြားဖူးတာက မိန်းမဟာ ဘုန်းကံနိမ့်တဲ့အတွက် မိန်းမအောက်ပိုင်းဝတ်တဲ့ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်လို့ကြားဘူးထားပါတယ်ဘုရား”
”ဘုန်းဆိုတာကို ရှင်းမှ ရတော့မယ် ဒကာ ဘုန်းဆိုတာ အကျိုးသဘောတရားပါ အစွမ်းအစလည်း ဖြစ်တယ် အားသာချက်လည်း ဖြစ်တယ် ဒကာ အကျိုးသဘောတရားပေါ့။
ဒါဟာ အကြောင်းတရားလုပ်ဆောင်ချက်ကို မူတည်ပြီး အကျိုးတရား ဘုန်းကံရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။
အလေးမခြင်း အကြောင်းဟာ သန်မာခြင်းအကျိုးကို ရမယ် သန်မာခြင်းဟာ ဘုန်းပဲ ဖော်ရွေပျူ ငှာခြင်းအကြောင်းဟာ လူချစ်လူခင်များခြင်း အကျိုးကို.ရမယ် ဒီ လူချစ်လူခင် များခြင်းဟာ ဘုန်းပဲ။
ထဘီတန်းအောက်ဝင်ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ဘယ်အကျိုးများ ထိခိုက်စေသလဲ ဒကာ တွေးကြည့်ပါ ရက်ကြာကြာဝတ်ပြီး မလျှော်ရသေးတဲ့ ထဘီဆိုရင်တော့ အနံ့ အသက်ဆိုးတဲ့ ဝေဒနာကို ရချင်ရမှာပေါ့”
ဘုန်းဘုန်း ခုနက ပြောတယ် နိမ့်တယ်ထင်ရင် နိမ့်တယ်ဆို ‘?
”ဒါဟာ ထဘီတန်းအောက်ဝင်ခြင်းကြောင့် နိမ့်တာမဟုတ်ဘူး နိမ့်တယ်လို့ထင်မိတဲ့ ဥပါဒါန်အကြောင်းကြောင့်ပဲ။
စိတ်မသက်မသာ ခံစားရတယ် မဟုတ်လား. ဒါ သက်တောင့်သက်သာစိတ် ပျက် စီးသွားခြင်းပေါ့ စိတ်သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်တာ မကောင်းဘူးလား ။
”မိမိပိုင်ဆ်ိုင်ထားသော ကောင်းသောအရာတစ်ခု ပျက်စီးယုတ်လျော့ခြင်းဟာ ဘုန်းနိမ့်ခြင်းပါပဲ ”
ရှေးအဆက်ဆက်က ဒီလိုပဲပြောလာကြတာ ဘုရား အရှင်ဘုရားလည်းသိမှာပါ ထဘီ တန်းအောက်ဝင်ရင် ဘုန်းနိမ့်တယ်ဆိုတာ ရှေးကတည်းက အယူအဆပါ”
”ဗုဒ္ဓက ကာလာမသုတ်ကို ဟောတယ် ရှေးကပြောတဲ့စကားမို့လို့လည်း အမှန် မယူလေနဲ့ တဲ့”
ရှေးထုံးက ပယ်သင့်သလား ဘုရား ❓
”ပယ်သင့်ခြင်း မပယ်သင့်ခြင်းဟာ ရှေးထုံးတွေ ဒီနေ့ ခေတ်ထုံးတွေပေါ်မှာ မမူတည်ပါဘူး အမှန် အမှားပေါ်သာ မူတည်ပါတယ် မှန်ရင် ယူမယ် မှားရင် ပယ်မယ် ..။
အမှန်အမှားကို ခွဲခြားဖို့သင့်မှာ ဥာဏ်ရည်ရှိတယ် ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းလည်း ရှိတယ် သင် – တွေးကြည့်ပါ ထဘီအောက်ဝင်ရင် ဘယ်လို အစွမ်းအစမျိုး ကျဆင်းနိုင်ပါသလဲ ။
သင်ျကနျးဟာ မွငျ့မွတျပါသလား ဘုရား?
” နိမျ့တယျထငျရငျ နိမျ့ပါတယျ၊ မနိမျ့ဘူးထငျရငျ မနိမျ့ပါဘူး ” ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ထဘီကွောငျ့ နိမျ့တာမဟုတျပဲ ” ထငျ ” ဆိုတဲ့ ဥပါဒါနျကွောငျ့သာ နိမျ့သှားတယျလို့ ထငျတာပါ။
ပိတျစတဈခုပဲဖွဈတဲ့ ထဘီလို နူးညံ့တဲ့ ပိတျစတဈခုဟာ သငျ့ကို ဘယျလိုမြား ဒုက်ခရောကျစမေလဲ။
ဘုနျးနိမျ့တယျဆိုတာက သငျထငျသလို မဟုတျပွနျဘူး ‘ဘုနျးနိမျ့ပွီဟဲ့ ဆိုတဲ့ သငျ့ရဲ့ ခံစားခကျြဟာ negative feeling ဘကျကို ရောကျသှားတယျ။
စိတျ အလိုမကြ ဖွဈစတေယျ စိတျကို နောကျကြိစတေယျ အဲဒါဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ အရညျအသှေး ကဆြငျးခွငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဘုနျးနိမျ့ခွငျးပါပဲ ..။
ဒါဆို အရှငျဘုရားအနနေဲ့ ဝငျခဲ့မိရငျရော နိမျ့မှာလား ?
”အဓိပ်ပာယျမဲ့ ထဘီတနျးအောကျ ဝငျဖို့တော့ စိတျကူး မရှိဘူး လိုအပျခဲ့လို့ ဝငျရပွီဆိုလညျး ဘုနျးနိမျ့တယျလို့ မယူဆပါဘူး။
ရဟနျးတဈပါးရဲ့ အစှမျးအစဖွဈတဲ့ သီလ , သမာဓိ , ပညာဟာ ဒီ ထဘီတနျးကွောငျ့ ကဆြငျးစရာ မရှိပါဘူး ”
သင်ျကနျးဟာ မွငျ့မွတျပါသလား ဘုရား ?
” သင်ျကနျးက မွငျ့မွတျတာ မဟုတျပဲ သင်ျကနျးဝတျဆငျရခွငျး ရညျရှယျခကျြက မွငျ့မွတျနတောပါ -ဒကာ။
‘ဘာရညျရှယျခကျြမို့လို့လဲ ဘုရား ‘
” ရောငျ့ရဲ ခွိုးခွံလိုခွငျး ”
”တပညျ့တျော ကွားဖူးတာက မိနျးမဟာ ဘုနျးကံနိမျ့တဲ့အတှကျ မိနျးမအောကျပိုငျးဝတျတဲ့ ထဘီတနျးအောကျဝငျရငျ ဘုနျးနိမျ့တယျလို့ ကွားဘူးထားပါတယျဘုရား”
”ဘုနျးဆိုတာကို ရှငျးမှ ရတော့မယျ ဒကာ ဘုနျးဆိုတာ အကြိုးသဘောတရားပါ အစှမျးအစလညျး ဖွဈတယျ အားသာခကျြလညျး ဖွဈတယျ ဒကာ အကြိုးသဘောတရားပေါ့။
ဒါဟာ အကွောငျးတရားလုပျဆောငျခကျြကို မူတညျပွီး အကြိုးတရား ဘုနျးကံရယျလို့ ဖွဈလာတယျ။
အလေးမခွငျး အကွောငျးဟာ သနျမာခွငျးအကြိုးကို ရမယျ သနျမာခွငျးဟာ ဘုနျးပဲ ဖျောရှပြေူ ငှာခွငျးအကွောငျးဟာ လူခဈြလူခငျမြားခွငျး အကြိုးကို.ရမယျ ဒီ လူခဈြလူခငျ မြားခွငျးဟာ ဘုနျးပဲ။
ထဘီတနျးအောကျဝငျခွငျး အကွောငျးကွောငျ့ ဘယျအကြိုးမြား ထိခိုကျစသေလဲ ဒကာ တှေးကွညျ့ပါ ရကျကွာကွာဝတျပွီး မလြှျောရသေးတဲ့ ထဘီဆိုရငျတော့ အနံ့အသကျဆိုးတဲ့ ဝဒေနာကို ရခငျြရမှာပေါ့”
ဘုနျးဘုနျး ခုနက ပွောတယျ နိမျ့တယျထငျရငျ နိမျ့တယျဆို ‘?
”ဒါဟာ ထဘီတနျးအောကျဝငျခွငျးကွောငျ့ နိမျ့တာမဟုတျဘူး နိမျ့တယျလို့ ထငျမိတဲ့ ဥပါဒါနျအကွောငျးကွောငျ့ပဲ။
စိတျမသကျမသာ ခံစားရတယျ မဟုတျလား. ဒါ သကျတောငျ့သကျသာစိတျ ပကျြ စီးသှားခွငျးပေါ့ စိတျသကျတောငျ့သကျသာ ဖွဈတာ မကောငျးဘူးလား ။
”မိမိပိုငျဆိုငျထားသော ကောငျးသောအရာတဈခု ပကျြစီးယုတျလြော့ခွငျးဟာ ဘုနျးနိမျ့ခွငျးပါပဲ ”
ရှေးအဆကျဆကျက ဒီလိုပဲပွောလာကွတာ ဘုရား အရှငျဘုရားလညျးသိမှာပါ ထဘီ တနျးအောကျဝငျရငျ ဘုနျးနိမျ့တယျဆိုတာ ရှေးကတညျးက အယူအဆပါ”
”ဗုဒ်ဓက ကာလာမသုတျကို ဟောတယျ ရှေးကပွောတဲ့စကားမို့လို့လညျး အမှနျ မယူလနေဲ့တဲ့”
ရှေးထုံးက ပယျသငျ့သလား ဘုရား ❓
”ပယျသငျ့ခွငျး မပယျသငျ့ခွငျးဟာ ရှေးထုံးတှေ ဒီနခေ့တျေထုံးတှပေျေါမှာ မမူတညျပါဘူး အမှနျ အမှားပျေါသာ မူတညျပါတယျ မှနျရငျ ယူမယျ မှားရငျ ပယျမယျ ..။
အမှနျအမှားကို ခှဲခွားဖို့ သငျ့မှာ ဉာဏျရညျရှိတယျ ဆငျခွငျနိုငျစှမျးလညျး ရှိတယျ သငျ – တှေးကွညျ့ပါ ထဘီအောကျဝငျရငျ ဘယျလို အစှမျးအစမြိုး ကဆြငျးနိုငျပါသလဲ ။
Author adminPosted on September 10, 2019 Categories Knowledge, ဘာသာရေး, သုတစာပေ
ဘုရား စေတီပုထိုးပေါ် အမျိုးသမီးတက်ရင် ငရဲကြီးမှာလား ?
မေး ~ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်သည် မွန်ပြည်နယ် မြို့တစ်မြို့မှ တန်ခိုးကြီး ဘုရားတစ်ဆူအား သွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပါသည်။
မတ်စောက်သော တောင်ကိုခဲယဉ်းစွာ တက်ခဲ့ရ၍ တောင်ပေါ် ရောက်သောအခါ မောမောနှင့်ထိုင်လိုက်ပြီး အားရပါးရ ဖူးမြော်လိုက်ပါသည်။
ညီမဖြစ်သူက မိန်းမ မတက်ရလို့ စာရေးထားတယ်ပြောမှ ကြည့်မိပြီး ဝမ်းနည်းရပါသည် တမင်တကာ ထိုင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မသ်ိ၍ထိုင်ခဲ့မိသော်လည်း အပြစ်ကျရောက်မည်ကို လွန်စွာ စိုးရိမ်မိပါသည်။
ထို့အတွက် တပည့်တော် အပြစ်ဖြစ်ပါသလားဘုရား ဖြေကြားပေးပါရန် လျှောက်ထားပါသည် ဘုရား။
ဖြေ ~ နိုင်ငံတိုင်းတွင် လူမျိုးဓလေ့အရ တားမြစ်ချက်များ ရှိကြပါသည် ဘာသာရေးဆိုင်ရာတို့တွင်လည်း တစ်ကျောင်းတစ် ဂါထာ တစ်ရွာ တစ်ပုဒ်ဆန်းဆိုသလို တားမြစ်ချက် ပညတ်ချက်များ ရှိတတ်ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ထို့အတူ ရှိကြရာ သိမ်အတွင်း ဘုရားခန်းဆောင်အတွင်း ဘုးရားဝတ်ကျောင်း ပရိဝုဏ်အပေါ်စသည် မိန်းမ မဝင်ရ,မတက်ရဟူသော တားမြစ်ချက်များကို တွေ့ရတတ်ပါသည်။
အထူးအားဖြင့် မွန်ပြည်နယ်တွင် ထိုအလေ့အထများကို နေရာများစွာ၌ တွေ့ရလေ့ရှိပါသည် လူမျိုးဓလေ့အယူအဆမျိုးသာဖြစ်ရာ ဘာသာရေး ပညတ်ချက်များ မဟုတ်ပါ။
ထိုမဝင်ရဆိုသော သိမ်ကျောင်း တန်းဆောင်းများအတွင့်သို့ မိန်းမများ ဝင်ရောက်၍ ပန်း ဆီမီး ရေကပ်လှူခြင်းဘုရားရှိခိုး တရားထိုင်ခြင်း စသည်တို့အတွက် ဘာသာရေး တားမြစ်ချက်မရှိ၍ အပြစ်ဖြစ်သည်ဟုကား မဆိုနိုင်ပါ။
ဆိုစရာလည်း အကြောင်းမရှိပါ သို့သော် ရပ်ရွာဓလေ့ လူမျိုးအယူအဆပိုင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များဖြစ်၍ လိုက်နာရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် အပန်းမကြီး ။
အများနှင့် မဆန့်ကျင်သဖြင့် ယောနိသော မနသိကာရ ထား၍ အကြာင်းအားလျော်စွာ လိုက်နာသင့်သည် ဟုသာ အဖြေပေးလိုပါသည်။
ဘုရား စတေီပုထိုးပျေါ အမြိုးသမီးတကျရငျ ငရဲကွီးမှာလား ?
မေး ~ အရှငျဘုရား တပညျ့တျောသညျ မှနျပွညျနယျ မွို့တဈမွို့မှ တနျခိုးကွီး ဘုရားတဈဆူအား သှားရောကျဖူးမွျောခဲ့ပါသညျ။
မတျစောကျသော တောငျကိုခဲယဉျးစှာ တကျခဲ့ရ၍ တောငျပျေါ ရောကျသောအခါ မောမောနှငျ့ထိုငျလိုကျပွီး အားရပါးရ ဖူးမွျောလိုကျပါသညျ။
ညီမဖွဈသူက မိနျးမ မတကျရလို့ စာရေးထားတယျပွောမှ ကွညျ့မိပွီး ဝမျးနညျးရပါသညျ တမငျတကာ ထိုငျခွငျးမဟုတျဘဲ မသိ၍ထိုငျခဲ့မိသျောလညျး အပွဈကရြောကျမညျကို လှနျစှာ စိုးရိမျမိပါသညျ။
ထို့အတှကျ တပညျ့တျော အပွဈဖွဈပါသလားဘုရား ဖွကွေားပေးပါရနျ လြှောကျထားပါသညျ ဘုရား။
ဖွေ ~ နိုငျငံတိုငျးတှငျ လူမြိုးဓလအေ့ရ တားမွဈခကျြမြား ရှိကွပါသညျ ဘာသာရေးဆိုငျရာတို့တှငျလညျး တဈကြောငျးတဈ ဂါထာ တဈရှာ တဈပုဒျဆနျးဆိုသလို တားမွဈခကျြ ပညတျခကျြမြား ရှိတတျကွပါသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျလညျး ထို့အတူ ရှိကွရာ သိမျအတှငျး ဘုရားခနျးဆောငျအတှငျး ဘုးရားဝတျကြောငျး ပရိဝုဏျအပျေါစသညျ မိနျးမ မဝငျရ,မတကျရဟူသော တားမွဈခကျြမြားကို တှရေ့တတျပါသညျ။
အထူးအားဖွငျ့ မှနျပွညျနယျတှငျ ထိုအလအေ့ထမြားကို နရောမြားစှာ၌ တှရေ့လရှေိ့ပါသညျ လူမြိုးဓလအေ့ယူအဆမြိုးသာဖွဈရာ ဘာသာရေး ပညတျခကျြမြား မဟုတျပါ။
ထိုမဝငျရဆိုသော သိမျကြောငျး တနျးဆောငျးမြားအတှငျ့သို့ မိနျးမမြား ဝငျရောကျ၍ ပနျး ဆီမီး ရကေပျလှူခွငျးဘုရားရှိခိုး တရားထိုငျခွငျး စသညျတို့အတှကျ ဘာသာရေး တားမွဈခကျြမရှိ၍ အပွဈဖွဈသညျဟုကား မဆိုနိုငျပါ။
ဆိုစရာလညျး အကွောငျးမရှိပါ သို့သျော ရပျရှာဓလေ့ လူမြိုးအယူအဆပိုငျးဆိုငျရာ တားမွဈခကျြမြားဖွဈ၍ လိုကျနာရှောငျကွဉျခွငျးဖွငျ့ အပနျးမကွီး ။
အမြားနှငျ့ မဆနျ့ကငျြသဖွငျ့ ယောနိသော မနသိကာရ ထား၍ အကွာငျးအားလြျောစှာ လိုကျနာသငျ့သညျ ဟုသာ အဖွပေေးလိုပါသညျ။
Author adminPosted on September 7, 2019 September 7, 2019 Categories Knowledge, ဘာသာရေး, သုတစာပေ
လူထွက်ခိုင်းရင် သတ်သေမယ်ဆိုတဲ့ ကိုရင်လေး
ထားဝယ်သားလေးမောင်သက်ဖြိုးအောင်သည် အသက်(၈)နှစ်အရွယ်၌ သူငယ်ချင်းများ ကိုရင်ဝတ် တာကိုမြင်၍ သူလည်း ကိုရင်ဝတ်ချင်သောကြောင့် မိဘများကို ခွင့်တောင်း၍ ကိုရင်ဝတ်ခဲ့ပါသည်။
(၁၅) ရက်ခန့်ကြာသောအခါ အခြားသူများ လူထွက်ကြကုန်သော်လည်း သူသည် ကိုရင်ဘဝ၌ ပျော်ပိုက်လျက်ပင် ရှိသည်။
သူ့၏အမေက အတန်းကျောင်းတက်ရမှာ ဖြစ်၍ လူထွက်ဖို့ရန် အတင်းပြောဆိုပြီး ထွက်ခိုင်းသည့်အတွက် ငိုယိုပြီး လူထွက်လိုက်ရလေသည်။
ကျောင်းနေရသော်လည်း ပျော်ရွှင်မှုမရှိ ကိုရင်ဘဝကိုသာ အမြဲတောင်းတလျက်ရှိသည် အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်၌ ကိုရင်ဝတ်ချင်လွန်း၍ ကျောင်းစာမလုပ်ဘဲ ကျောင်းပြေးမှုများလာပါသည်။
သူ၏အမေက ဘယ်လိုပင်ပြောပြော စာမကျက်တော့ပါ ကျောင်းထွက်ရန်သာ မကြာခဏပြောလေသည် နောက်ဆုံးသူ၏အမေသည် ကျောင်းထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရပါသည်။
သို့သော်ကိုရင်တော့ ဝတ်ခွင့်မပေးပါ သူသည် ကိုရင်ဝတ်ခွင့်မရဘဲ အလုပ်ကို (၆)လကြာအောင် မိဘကို ဝိုင်းကူလုပ်ပေးခဲ့ရသည် ကိုရင်ဝတ်ချင်လွန်း၍ သူသည် မိဘကို ခွင့်တောင်း ပြန်လေသည်။
“သားကိုရင်ဝတ်ချင်တာ အလုပ်လုပ်ပျင်းလို့ မဟုတ်ဘူးအမေ ကိုရင်ဘဝမှာပျော်လို့ပါအမေ၊သားကို ကိုရင် ဝတ်ခွင့်ပေးနော်အမေ”ဟု အကြိမ်ကြိမ်ခွင့်တောင်း လာတော့ သူ၏အမေက (၃)လဝတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပါသည်။
သူသည် ကိုရင်ဝတ်ခွင့်ရ၍ အလွန်ပျော်ရွှင်သွား လေသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် (၃)လအချိန်ပြည့်ခါနီးသောအခါ လူထွက်ရမှာကြောက်၍ မပျော်ရွှင်တော့ပါ။
ထို့ကြောင့်သူသည် ဆရာတော်မသိအောင် အခြားရွာသို့ ထွက်ပြေး၍ သွားရောက် နေထိုင်လေသည် သူ၏အမေလည်း (၃)လပြည့်သောအခါ သားကို လူဝတ်လဲရန် ကျောင်းသို့ ရောက်လာ၏။
သို့သော် သူ့၏သားကို မတွေ့တော့ပါ ရွာကျောင်းဆရာတော်ကို လျှောက်ထားတော့အခြားရွာကို ထွက်ပြေးသွားမှန်း သိရ၍ ထိုရွာကျောင်းသို့လိုက်ကာ ခေါ်ဆောင်လေတော့သည်။
မိမိတို့ရွာကျောင်းပြန်ရောက်လာသောအခါ သူ၏သားကိုရင်ကို လူထွက်ရန် ပြောဆိုပါသည် ထိုအချိန်၌ ကိုရင်သည် ပြတ်သားသောဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုကို ချထားခဲ့လေသည်။
သူ၏အမေက လူထွက်ရန်ပြောသောအခါ “သားလူမထွက်တော့ဘူး၊ လူထွက်ခိုင်းရင် သတ်သေတော့မယ်”ဟု ပြန်ပြောလေသည် သူ့အမေက သတ်သေလည်းသတ်သေပေါ့၊
အခုလူထွက်ရမယ်ဟု ပြောလာသောအခါ၌ ကိုရင်သည် သူ၏လက်ကို ဓားဖြင့်လှီးဖြတ်လေတော့သည် သွေးများ ဖြာထွက်လာမှ သူ၏ အမေသည် စိုးရိမ်၍ ကိုရင်၏ လက်ကိုကိုင်မည်လုပ်ရာ ။
ကိုရင်က ” မကိုင်နဲ့၊ လူထွက်ခိုင်းရင် သတ်သေလိုက် တော့မယ်”ဟု ပြန်ပြောသည့်အခါမှ သူ၏အမေသည် ပို၍စိုးရိမ်ထိတ်လန့်၍ လက်လျှော့ကာ ခွင့်ပြုလိုက်ရလေသည်။
ယခုအချိန်၌ကား မောင်သက်ဖြိုးအောင်သည် ကိုရင်သောဘနအမည်ဖြင့် သူအသက်တမျှ ချစ်မြတ်နိုးသော သာသနာတော်မြတ်ကြီး၌ (၃)ဝါရသောသာမဏေတစ်ပါးပင် ဖြစ်၍နေပါသည်။
သူသည် တောရဝိနည်းစာသင်တိုက်တစ်ခု၌ ဝိနည်းသီလကို အထူးလေးစား၍ ပရိယတ္တိစာပေများကို ကြိုးစားအားထုတ်လျက်ရှိပါသည်။
သူ၏ထူးခြားချက်ကား ဝိနည်းသီလကို အထူးလေးစားရုံမျှမက ကျင့်နိုင်ခဲသော နိသဇ္ဇိဓုတင်အစရှိသော အကျင့်မြတ်များကိုလည်း ကျင့်သုံးနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ငယ်ရွယ်စဉ် ကလေးဘဝမှစ၍ သူမြတ်နိုးတောင်းတခဲ့သော သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရှင်ရဟန်းဘဝ၌ အသက်ထက်ဆုံးတိုင် နေထိုင်ပြီး သာသနာပြုရန်စိတ်ဓာတ်သည်ကား မပြောင်းလဲသည့်အပြင် ။
ဗုဒ္ဓစာပေများကိုနေ့စဉ် သင်ယူရ၍ ပို၍ပို၍ သဒ္ဓါတရားကြီးမားလာကာ ခိုင်မာသော သန္ဓိဋ္ဌာန်ချက်အဖြစ် ကျောက်တောင်ပမာဆက်လက်တည်ရှိနေလေတော့၏။ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
လူထှကျခိုငျးရငျ သတျသမေယျဆိုတဲ့ ကိုရငျလေး
ထားဝယျသားလေးမောငျသကျဖွိုးအောငျသညျ အသကျ(၈)နှဈအရှယျ၌ သူငယျခငျြးမြား ကိုရငျဝတျ တာကိုမွငျ၍ သူလညျး ကိုရငျဝတျခငျြသောကွောငျ့ မိဘမြားကို ခှငျ့တောငျး၍ ကိုရငျဝတျခဲ့ပါသညျ။
(၁၅) ရကျခနျ့ကွာသောအခါ အခွားသူမြား လူထှကျကွကုနျသျောလညျး သူသညျ ကိုရငျဘဝ၌ ပြျောပိုကျလကျြပငျ ရှိသညျ။
သူ့၏အမကေ အတနျးကြောငျးတကျရမှာ ဖွဈ၍ လူထှကျဖို့ရနျ အတငျးပွောဆိုပွီး ထှကျခိုငျးသညျ့အတှကျ ငိုယိုပွီး လူထှကျလိုကျရလသေညျ။
ကြောငျးနရေသျောလညျး ပြျောရှငျမှုမရှိ ကိုရငျဘဝကိုသာ အမွဲတောငျးတလကျြရှိသညျ အသကျ(၁၃)နှဈအရှယျ၌ ကိုရငျဝတျခငျြလှနျး၍ ကြောငျးစာမလုပျဘဲ ကြောငျးပွေးမှုမြားလာပါသညျ။
သူ၏အမကေ ဘယျလိုပငျပွောပွော စာမကကျြတော့ပါ ကြောငျးထှကျရနျသာ မကွာခဏပွောလသေညျ နောကျဆုံးသူ၏အမသေညျ ကြောငျးထှကျခှငျ့ပွုလိုကျရပါသညျ။
သို့သျောကိုရငျတော့ ဝတျခှငျ့မပေးပါ သူသညျ ကိုရငျဝတျခှငျ့မရဘဲ အလုပျကို (၆)လကွာအောငျ မိဘကို ဝိုငျးကူလုပျပေးခဲ့ရသညျ ကိုရငျဝတျခငျြလှနျး၍ သူသညျ မိဘကို ခှငျ့တောငျး ပွနျလသေညျ။
“သားကိုရငျဝတျခငျြတာ အလုပျလုပျပငျြးလို့ မဟုတျဘူးအမေ ကိုရငျဘဝမှာပြျောလို့ပါအမေ၊သားကို ကိုရငျ ဝတျခှငျ့ပေးနျောအမေ”ဟု အကွိမျကွိမျခှငျ့တောငျး လာတော့ သူ၏အမကေ (၃)လဝတျခှငျ့ပွုလိုကျပါသညျ။
သူသညျ ကိုရငျဝတျခှငျ့ရ၍ အလှနျပြျောရှငျသှား လသေညျ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ (၃)လအခြိနျပွညျ့ခါနီးသောအခါ လူထှကျရမှာကွောကျ၍ မပြျောရှငျတော့ပါ။
ထို့ကွောငျ့သူသညျ ဆရာတျောမသိအောငျ အခွားရှာသို့ ထှကျပွေး၍ သှားရောကျ နထေိုငျလသေညျ သူ၏အမလေညျး (၃)လပွညျ့သောအခါ သားကို လူဝတျလဲရနျ ကြောငျးသို့ ရောကျလာ၏။
သို့သျော သူ့၏သားကို မတှတေ့ော့ပါ ရှာကြောငျးဆရာတျောကို လြှောကျထားတော့အခွားရှာကို ထှကျပွေးသှားမှနျး သိရ၍ ထိုရှာကြောငျးသို့လိုကျကာ ချေါဆောငျလတေော့သညျ။
မိမိတို့ရှာကြောငျးပွနျရောကျလာသောအခါ သူ၏သားကိုရငျကို လူထှကျရနျ ပွောဆိုပါသညျ ထိုအခြိနျ၌ ကိုရငျသညျ ပွတျသားသောဆုံးဖွတျခကျြ တဈခုကို ခထြားခဲ့လသေညျ။
သူ၏အမကေ လူထှကျရနျပွောသောအခါ “သားလူမထှကျတော့ဘူး၊ လူထှကျခိုငျးရငျ သတျသတေော့မယျ”ဟု ပွနျပွောလသေညျ သူ့အမကေ သတျသလေညျးသတျသပေေါ့၊
အခုလူထှကျရမယျဟု ပွောလာသောအခါ၌ ကိုရငျသညျ သူ၏လကျကို ဓားဖွငျ့လှီးဖွတျလတေော့သညျ သှေးမြား ဖွာထှကျလာမှ သူ၏ အမသေညျ စိုးရိမျ၍ ကိုရငျ၏ လကျကိုကိုငျမညျလုပျရာ ။
ကိုရငျက ” မကိုငျနဲ့၊ လူထှကျခိုငျးရငျ သတျသလေိုကျ တော့မယျ”ဟု ပွနျပွောသညျ့အခါမှ သူ၏အမသေညျ ပို၍စိုးရိမျထိတျလနျ့၍ လကျလြှော့ကာ ခှငျ့ပွုလိုကျရလသေညျ။
ယခုအခြိနျ၌ကား မောငျသကျဖွိုးအောငျသညျ ကိုရငျသောဘနအမညျဖွငျ့ သူအသကျတမြှ ခဈြမွတျနိုးသော သာသနာတျောမွတျကွီး၌ (၃)ဝါရသောသာမဏတေဈပါးပငျ ဖွဈ၍နပေါသညျ။
သူသညျ တောရဝိနညျးစာသငျတိုကျတဈခု၌ ဝိနညျးသီလကို အထူးလေးစား၍ ပရိယတ်တိစာပမြေားကို ကွိုးစားအားထုတျလကျြရှိပါသညျ။
သူ၏ထူးခွားခကျြကား ဝိနညျးသီလကို အထူးလေးစားရုံမြှမက ကငျြ့နိုငျခဲသော နိသဇ်ဇိဓုတငျအစရှိသော အကငျြ့မွတျမြားကိုလညျး ကငျြ့သုံးနခွေငျးပငျဖွဈသညျ။
ထို့ပွငျ ငယျရှယျစဉျ ကလေးဘဝမှစ၍ သူမွတျနိုးတောငျးတခဲ့သော သာသနာ့ဝနျထမျး ရှငျရဟနျးဘဝ၌ အသကျထကျဆုံးတိုငျ နထေိုငျပွီး သာသနာပွုရနျစိတျဓာတျသညျကား မပွောငျးလဲသညျ့အပွငျ ။
ဗုဒ်ဓစာပမြေားကိုနစေ့ဉျ သငျယူရ၍ ပို၍ပို၍ သဒ်ဓါတရားကွီးမားလာကာ ခိုငျမာသော သန်ဓိဋ်ဌာနျခကျြအဖွဈ ကြောကျတောငျပမာဆကျလကျတညျရှိနလေတေော့၏။ရှငျလနျးခမျြးမွကွေ့ပါစေ။
Author adminPosted on September 6, 2019 Categories Knowledge, ဘာသာရေး, သုတစာပေ